(၁၃၇၉) ခုႏွစ္ (၁)ႏွစ္စာ ေဗဒင္ေပါင္းခ်ဳပ္ - ေဗဒင္၀ါသနာအိုး
Posted on April 29, 2017 May 1, 2017 by Bay Din War Tanar Oh
(၁၃၇၉) ခုႏွစ္ (၁)ႏွစ္စာ ေဗဒင္ေပါင္းခ်ဳပ္
တနဂၤေႏြ ေန႔ဖြား ကံဇာတာ (၁၃၇၉)
တနဂၤေႏြေန႔ဖြားေတြ အားလုံးနီးနီးအတြက္ ဒီနွစ္သစ္ကေတာ့ ……လူခ်စ္လူခင္မ်ားမယ့္ နွစ္တစ္နွစ္ပါပဲ။
တနည္းအားျဖင့္ စန္းပြင့္မယ့္ နွစ္တစ္နွစ္လုိ႔ ဆုိၾကပါစုိ႔။
မႏွစ္က ရွာရေဖြရ…ခက္ခဲ့သမွ်….လြယ္လြယ္နဲ႔မရခဲ့သမွ်…၊ ဒီတစ္နွစ္ေတာ့ ..ေရကန္အသင့္ ၾကာအသင့္ အေနအထားေလးေတြလည္း ပါလာနုိင္ပါတယ္။ ေဘးက်ပ္နံက်ပ္အေျခအေန အနဲငယ္ၾကံဳနုိင္ေပမယ့္….အသက္ေမြးမႈမွာ ကူညီေပးမယ့္ ပုဂၢိဳလ္ေတြလည္း ေပၚလာတတ္ခ်ိန္ပါ။ ခက္တာက………….
ဒီတစ္နွစ္ထဲမွာ ကုိယ္တုိင္က….နဲနဲ ေပါ့ေလ်ာ႔ေနမိတတ္ပါတယ္။ အရင္နွစ္ေတြလုိ….ျပင္းျပင္းထန္ထန္ၾကိဳးစားလုိ႔ သိပ္မရဘဲ…အေပ်ာ္အပါးဘက္ပဲ ျဖစ္ေစ…၊ ေပါ့ေပါ့ပါးပါးလြတ္လြတ္လပ္လပ္ပဲ ျဖစ္ေစ…၊ ဘာမွ သိပ္ေလးေလးနက္နက္ လုပ္လုိ႔မရဘဲ ျဖစ္ေစ… ျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။
အေလးအနက္ၾကီးထားျပီး လုပ္ျပန္ေတာ့လည္း …လုပ္သမွ်က လမ္းတစ္၀က္မွာ ပဲ ….အၾကံျပတ္သြားေနတတ္ပါတယ္။
ဆုိေတာ့ ဒီတစ္နွစ္ကေတာ့….အရိပ္အေျခၾကည့္ျပီး…ေကာင္းတဲ့ကံေလးေပၚလာခ်ိန္မွာ ေမ်ာလုိက္ေနရမယ့္ နွစ္မ်ဳိးဆန္ပါလိမ့္မယ္။
ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ မနွစ္ကနဲ႔စာရင္ေတာ့ …ဒီတစ္နွစ္ဟာ ..အမ်ားစုေသာ တနဂၤေႏြေန႔ဖြားေတြအတြက္ …သက္ေတာင့္သက္သာ ပုိမုိရွိၾကပါလိမ့္မယ္။
အသည္းစြဲေအာင္ ခ်စ္မိေလာက္စရာ ေပၚလာတတ္ေသာ နွစ္မ်ဳိးျဖစ္ပါတယ္။
လူပ်ဳိ အပ်ဳိတုိ႔အဖုိ႔….အခ်စ္ကုိ လက္္တဲ့မစမ္းမိလုိက္နဲ႔….တစ္ကယ္ျမတ္နုိးမိ…စြဲမိေစမယ့္ အခ်စ္မ်ဳိး ၾကံဳသြားနုိင္တဲ့ နွစ္ပါ။ အလုိလုိေနရင္း တစ္စိမ့္စိမ့္ခ်စ္မိ….လုိလားတပ္မက္မိေစမယ့္ …..အခ်စ္နတ္သမီး ဗီးနပ္စ္ရဲ႕ ညိွ႕ၾကိဳးမိေနတဲ့ နွစ္မ်ဳိး ျဖစ္ပါတယ္။
အိမ္ေထာင္သည္ေတြအဖုိ႔ကေတာ့…..ခ်စ္ဒုကၡကို ပုိမုိခံစားရနုိင္ကိန္းရွိပါတယ္။ အေၾကာင္းအားေလ်ာ္စြာ ခ်စ္လ်က္နဲ႔ခြဲေနရျခင္းမ်ဳိးေလးေတြ ေသာ္လညး္ေကာင္း
ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ရုပ္ပုိင္းေ၀းကြာရမႈ အခုိက္အတန္႔ကုိ သီးခံနုိင္ၾကဖုိ႔လုိပါတယ္။ စိတ္ပုိင္းေ၀းကြားသြားရမႈ ..စိတ္သေဘာထားမတုိက္ဆုိင္ အခ်င္းမ်ားရမႈေတြထက္စာရင္…..အမ်ားၾကီးသက္သာလုိ႔ပါပဲ။
ပညာသင္ၾကားခြင့္ကံ ေတြ ပြင့္လန္းေနတဲ့ ကာလတစ္ခုပါ။ ပညာသင္ယူခြင့္ေတြ အလုိလိုရရွိေနတတ္ပါတယ္။ အတန္းပညာပဲျဖစ္ျဖစ္…ျပင္ပသင္တန္းေတြပဲျဖစ္ျဖစ္ …အလုိလုိ တက္ခြင့္ သင့္ခြင့္ေတြ က်ေရာက္လာပါမယ္။ ပညာေရး ကံ အားသာသည့္ နွစ္မ်ဳိးျဖစ္ပါတယ္။
အမ်ဳိးသမီးမ်ား …သားအိမ္ နွင့္ ပတ္သက္ျပီးျဖစ္ေစ…ေမြးလမ္းေၾကာင္းနဲ႔..မအဂၤါ ဆုိင္ရာ ေရာဂါဘယ အေသးစားမ်ဳိးတုိ႔ ျဖစ္ေစ…ကပ္ျငိလြယ္တတ္ေသာ ကာလပါ။ အထူးသျဖင့္ ..ဗုဒၶဟူးေန႔ နဲ႔ တနဂၤေႏြေန႔တုိ႔မွာ ပုိမုိဂရုစုိက္ၾကရပါမယ္။ ေဆး၀ါးအစားအစာ တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးရဲ႕ ေဘးထြက္အာနိသင္ေၾကာင့္ျဖစ္ေစ…အဆုိပါ…ဥပါဒ္မ်ဳိးကုိ ၾကံဳေတြ႕ရၾကတတ္တာကုိလည္း …သတိျပဳရပါမယ္။
က်ားမ မေရြး ..အသည္း နဲ႔ ပတ္သက္ျပီးလည္း …ေရာဂါဘယ အနဲငယ္ ျဖစ္ပြားေစလြယ္ေသာ ကာလျဖစ္ပါတယ္။
ေပ်ာ္သလုိေနပါကြယ့္ ဆုိတဲ့ကာလပါ။ ခရီးယာယီေတြ ေပါပါမယ္။ ၾကားသုံးၾကား…..တင္မက….၊ ၾကားမွန္သမွ် အကုန္၀င္ပါေနရပါမယ္။
ဆုိေတာ့….ဒီတစ္နွစ္ မွာ တနဂၤေႏြေန႔ဖြားေတြ အဖုိ႔….ၾကား၀င္ေဆာင္ရြက္ေပးရေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားနဲ႔ အသက္ေမြးမယ္ဆုိရင္ …အလြန္ေကာင္းပါသဗ်ာ။
လူေပါင္းမ်ားစြာဟာ တနဂၤေႏြေန႔ဖြားေတြကုိ ျမင္လုိက္တာနဲဲ႔ကုိ….
ၾကားခံအျဖစ္ အသုံးျပဳ…အက်ဳိးေဆာင္ေပးရန္…ေတာင္းဆုိမႈ ျပဳလာတတ္ပါတယ္။
ေလာကီအာရုံကာမဂုဏ္က ဖ်ားေယာင္းလာမယ့္ နွစ္တစ္နွစ္ပါ။
အင္မတန္ အိမ္တြင္းပုံး ျပီး ရုိးရုိးကုပ္ကုပ္ေနတတ္သူေတြေတာင္….ဒီတစ္နွစ္ေတာ့ ေသာၾကာျဂိဳဟ္ရဲ႕ ဖ်ားေယာင္းမႈေၾကာင့္….ဆန္းဆန္းျပားျပား သရုိးသရီ..ခံစားမႈေတြ သက္ေရာက္လာေစတတ္ပါတယ္။
တနဂၤေႏြေန႔ဖြားေတြ အတြက္ ဒီတစ္နွစ္ အက်ဳိးအေပးနုိင္ဆုံး ျဂိဳဟ္ကေတာ့ ၾကာသာပေတးျဂိဳဟ္ ျဖစ္ျပီး…..ဆုိးက်ဳိးအျပဳနုိင္ဆုံး ျဂိဳဟ္ကေတာ့ အဂၤါျဂိဳဟ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
စေသာ အနီးအစပ္ ပတ္၀န္းက်င္ေတြနဲ႔ သဟဇာတျဖစ္မႈ နဲပါးရတတ္ျခင္း ေသာ္လည္းေကာင္း…သုိ႔မဟုတ္/
ထုိ အနီးနားခ်င္းေတြ ပ်က္ဆီးထိခုိက္ျခင္းမ်ားကုိေသာ္လည္းေကာင္း…
ျမင္ရေတြ႕ရမယ့္ ကာလတစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါတယ္။
အနီရဲရဲအေရာင္ နဲ႔ အေရွ႕ေတာင္စူးစူးအရပ္တုိ႔ကုိ အဓိကေရွာင္က်ဥ္သင့္ပါတယ္။
နံ႔သာေရာင္ နဲ႔ ၀ါညိဳေရာင္ ကေတာ့ အက်ဳိးေပးအေရာင္ျဖစ္ျပီး…အေနာက္စူးစူးအရပ္ကေန အက်ဳိးေပးတတ္ပါတယ္။
ေငြသားစစ္စစ္ ဖလားေလးတစ္ခုကုိ ဧည့္ခန္း မွာ ထားသင့္ေသာ နွစ္ေကာင္းမြန္ျမတ္တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။
တနဂၤေႏြေန႔ဖြား မ်ား အားလုံး က်န္းမာခ်မ္းသာျခင္း …၊ ေလာကီအက်ဳိးစီးပြား ….ေလာကုတၱရာ အက်ဳိးစီးပြား နွစ္ျဖာေသာအက်ဳိး တုိးတက္နုိင္ၾကျခင္း ရွိၾကသည္ ျဖစ္ၾကပါေစသတည္း။
တနလၤာေန႔ဖြား တုိ႔ ကံဇာတာ (၁၃၇၉)
တနလၤာေန႔ဖြားေတြ အမ်ားစု အတြက္…
မနွစ္က တုန္းက တနလၤာေန႔ဖြားေတြ….အနိမ္ခံရ၊ အပယ္ခံရ၊ အမုန္းခံရ…မ်ားခဲ့သမွ်…..ဒီတစ္နွစ္ေတာ့….
ဥပမာအားျဖင့္ ၀န္ထမ္းေတြဆုိ…..နယ္ဘက္၊ အစြန္အဖ်ားက်ေသာေဒသမ်ား၊ ပုံမွန္လုပ္ေနၾက ဌာနမ်ဳိးမဟုတ္ေသာ…
လုပ္ငန္းမ်ဳိးမဟုတ္ေသာ…လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား ….ေနရာေဒသမ်ားကုိ ေျပာင္းေရႊ႕ၾကရတတ္ခ်ိန္မ်ဳိး ျဖစ္ေနပါတယ္။
အထူးသျဖင့္ ပ်ဳိရြယ္သူ လူပ်ဳိအပ်ဳိ ..လူလြတ္ေတြအဖုိ႔…..
သမီးရည္းစားေရးရာက႑ မွာ အေျပာင္းအလည္း ေတြ ျဖစ္လြယ္တတ္ခ်ိန္ပါ။
ေနာက္တစ္ေယာက္ေပၚလာတာနဲ႔…ပထမတစ္ဦးနဲ႔ ..ျပသနာျဖစ္လြယ္ေသာ အခ်ိန္လုိ႔ ဆုိနုိင္ပါတယ္။ ဆုိေတာ့…ဒီနွစ္မ်ဳိးသည္…….
မုန္႔စားရင္း လွည္းစီး…ငါးရံနွစ္ေကာင္ ေသေသ၀ပ္၀ပ္နဲ႔ တစ္ျပိဳက္နက္ ဖမ္းလုိ႔ရနုိင္ေသာ ကာလမ်ဳိးမဟုတ္ပါ။
ဒုတိယတစ္ေယာက္ခ်ဥ္းကပ္လာတာနဲ႔ ပထမတစ္ေယာက္နဲ႔ ျပသနာ…တက္နုိင္ဖုိ႔ ေသခ်ာေနေသာ ကာလမ်ဳိးျဖစ္ပါတယ္။
ဆရာသမားေတြနဲ႔ …ပညာရွင္ဆုိသူေတြနဲ႔….အတုိက္အခံ ျဖစ္လြယ္ေသာ ကာလပါ။ သတိျပဳပါမယ္။
ကုိယ္ဘယ္ေလာက္ၾကိဳးစားသည္ျဖစ္ေစ…..ရသင့္သေလာက္ ဂုဏ္ထူး ဘြဲထူး..ရနုိင္ဖုိ႔ေတာ့ခက္ခဲတတ္ပါတယ္။ ဒူးေလာက္တင္မွ ရင္ေလာက္က်မယ့္ကာလ တစ္ခုပါ။
ဥပမာအားျဖင့္ …ေက်ာ္ေက်ာ္သိန္း၊ ခင္စႏၵာေသာ္၊ မ်ဳိးမ်ဳိးသြင္၊ စန္းသီတာေသာ္၊ စသည္ျဖင့္ေသာ အမည္ရွင္မ်ဳိးေတြမွာ…..
မုခ် အခြင့္အလမ္းေကာင္း၊ အေထာက္အပံ႔ေကာင္း၊ေနရာေကာင္း ရလြယ္ေနပါလိမ့္မယ္။
ေလာကီအက်ဳိးစီးပြား…ေလာကုတၱရာအက်ဳိးစီးပြား နွစ္ျဖာကုိ….မွ်တစြာ ရရွိနုိင္ၾကသည္ျဖစ္ေသာ……………..
နွစ္ေကာင္းနွစ္ျမတ္တစ္ခု အျဖစ္ ျဖတ္သန္းနုိင္ၾကပါေစသတည္း။
အဂၤါေန႔ဖြားတုိ႔ ကံဇာတာ (၁၃၇၉)
အလုပ္တစ္ခုလုပ္လက္စ မျပီးေသးမီ..ေနာက္တစ္ခုကုိ ေျပာင္းလုပ္လုိက္ရတတ္ေသာ နွစ္မ်ဳိးပါ။ ဟုိဟာလည္း မျပီးေသး…၊ သည္ဟာလည္း အဆုံးထိမေရာက္ …ေတာင္ေျပးလုပ္လုိက္ရ…ေျမာက္ေျပးလုပ္လုိက္ရ ျဖစ္တတ္ေသာ နွစ္မ်ဳိးလုိ႔ ဆုိပါစုိ႔။
ဒီတစ္နွစ္ထူးျခားတာက…အက်ဳိးစီးပြား ရွာေဖြေရးမွန္သမွ်မွာ..အဂၤါေန႔ဖြားေတြအဖုိ႔…အျပိဳင္အဆုိင္ ကင္းသည္ဟူျပီးမရွိသေလာက္ …ကုိ….ရန္သူျပိဳင္ဘက္ေတြ မ်ားလာနုိင္ျခင္းပါပဲ။
ခ်စ္မႈေရးရာ…မွာ ေပြလီလြယ္တတ္ေသာ ကာလမ်ဳိးပါ။ မုန္႔စားရင္းလွည္းစီး..ငါးရံနွစ္ေကာင္ဖမ္း ဇာတ္လမ္းမ်ဳိးေလးေတြ ..ၾကံဳလြယ္ ျဖစ္လြယ္ေသာ ကာလလုိ႔ ဆုိနုိင္ပါတယ္။
တိတ္တိတ္ပုန္း ဇာတ္လမ္းမွာ …မင္းသားမင္းသမီး ျဖစ္လုိက္တာနဲ႔…
ေရွ႕လာမယ့္ ၁၃၈၀ နွစ္ထဲမွာ ေမတၱာေရး ကေမာက္ကမ ျဖစ္ဖုိ႔ အတြက္ စရံသပ္လုိက္သလုိပဲ ေသခ်ာသြားနုိင္ပါတယ္။ ဒီတစ္နွစ္လုပ္မိိမယ့္ အမွားေတြရဲ႕ ေနာက္ဆက္တြဲရလာဒ္ကုိ…ေနာက္တစ္နွစ္ ၁၃၈၀ မွာ အေျဖျပန္ထြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
မနွစ္က ပညာသင္ၾကားေရးဆုိင္ရာေတြမွာ အခက္အခဲ မ်ားခဲ့သမွ်…ဒီတစ္နွစ္ ျပန္လည္ျပီး အခြင့္အလမ္းေကာင္းေတြ ျပန္လည္ေပၚေပါက္လာနုိင္ပါျပီ။
အလြန္က်ဆင္းလြယ္ေသာ နွစ္ပါ။ တစ္နွစ္လုံး…သတိကပ္ထားမွ ေတာ္ရုံက်မယ့္နွစ္ပါ။
အလုိလုိခြန္အားဆုတ္ယုတ္ေနတတ္ျခင္း၊ အဆုတ္ နွင့္ ေလရႈျပြန္ဥပါဒ္၊ ၀မ္းရင္ ဥပါဒ္ေပးျခင္း၊ ေလေၾကာင့္ ဥပါဒ္ေပးျခင္း၊ အာရုံေၾကာပင္ပန္းႏြမ္းနယ္တတ္ျခင္းေတြ..အထူးဂရုစုိက္မယ့္နွစ္မ်ဳိးပါ။
လူေတြက ကုိယ့္ကုိ ျမင္တာနဲ႔ ခုိင္းခ်င္ လာပါမယ္။ လုပ္ေပးနုိင္တာ ဆုိရင္ ..အခမဲ့ပဲ ျဖစ္ျဖစ္…ေစတနာ႔၀န္ထမ္းလုပ္ေပးလုိက္သင့္ေသာ နွစ္မ်ဳိးျဖစ္ပါတယ္။
သူတစ္ပါးအက်ဳိးေဆာင္မွ…ကုိယ့္အက်ဳိးေအာင္မယ့္ …အရွင္းဆုံး ဥပမာနဲ႔ ကုိက္ညီေနေသာ နွစ္မ်ဳိး ျဖစ္ပါတယ္။
လူပုဂၢိဳလ္ေတြမေျပာနဲ႔ သာသနာ႔ေဘာင္က ရဟန္းေတြမွာေတာင္ ..အဂၤါေန႔ဖြားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖုိ႔ ေလာကုတၱရာအက်ဳိးစီးပြား ရွာေဖြရာမွာ…အေနွာက္အယွက္ ရန္ မကင္းဘဲ ျဖစ္ရတတ္ခ်ိန္ပါ။ (ေလ့လာၾကည့္ပါ)။
အလုပ္ကေန ခြင့္ယူသင့္ရင္ယူပါ။ (ခြက္ရက္ရွည္အထိယူပစ္ပါ။)
ဒီေနရာမွာ ျဖဳန္း္ဆုိတာကုိ ဘာေၾကာင့္သုံးရသလဲ ဆုိေတာ့…အခ်ိန္တစ္ခ်ဳိ႕ မုခ်ေလလြင့္ ဆုံးရႈံးနုိင္တဲ့ နွစ္မ်ဳိးျဖစ္လုိ႔ပါပဲ။
ဆုိေတာ့…လြတ္က်မွာနဲ႔စာရင္ ေသခ်ာစနစ္တစ္က် လႊတ္ခ်ပါ။
ဒီတစ္နွစ္က အဂၤါေန႔ဖြားေတြအတြက္ အပယ္ခံနွစ္၊ အနင္းခံနွစ္၊ အမုန္းခံနွစ္ လုိ႔လည္း ဆုိနုိင္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ကုိယ္က်ဳိးစီးပြားကုိေရွ႕တန္းတင္ေလေလ……..ထုိကံမ်ဳိး တည့္တည့္သင့္လာတတ္ေလေလပါပဲ။
ဗုဒၶဟူး/ရာဟုဖြားတုိ႔ ကံဇာတာ (၁၃၇၉)
ဗုဒၶဟူး နဲ႔ ရာဟု ဖြားတုိ႔သည္…တူသေယာင္ေယာင္နဲ႔ ကြဲလြဲေသာ အက်ဳိးေပးကံေတြ ရွိၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ …လက္၀င္ေပမယ့္ ..ရသေလာက္ေတာ့ …ၾကိဳးစားခြဲျခားျပီး ေရးေပးသြားပါ့မယ္ခင္ဗ်ာ။
ဒီတစ္နွစ္မွာ ဗုဒၶဟူး/ရာဟုသည္ အဓိပတိဌာနမွာ ရပ္တည္ရပါတယ္။ ဗုဒၶဟူးအေနနဲ႔ သာမာန္ရပ္တည္မႈမ်ဳိး ျဖစ္ေသာ္လည္း …ရာဟုအေနနဲ႔ကေတာ့..မဟာဘုတ္ ဥစ္ျဂိဳဟ္ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီနွစ္မွာ ဗုဒၶဟူး/ရာဟု ဖြား ဇာတာရွင္ေတြသည္….စြမ္းေဆာင္ရည္ ေပၚလြင္လာမယ့္ အေနအထား ရရွိလာပါတယ္။
အက်ဳိးစီးပြား အင္မတန္ ရွာရေဖြရလြယ္ကူလာေစတတ္တဲ့ နွစ္မ်ဳိးပါ။ ပညာပဲရွာရွာ..၊ စီးပြားပဲရွာရွာ ၊ ေလာကီအက်ဳိးစီးပြား၊ ေလာကုတၱရာအက်ဳိးစီးပြား ဘာပဲရွာရွာ …ရလြယ္…နီးစပ္ေသာ နွစ္မ်ဳိး ျဖစ္ပါတယ္။
ရာဟုဖြားမ်ားအေနနဲ႔ကေတာ့….တစ္ၾကိမ္နဲ႔ ၾကိဳးစားလုိ႔ မရခဲ့ေသးသည့္ အခ်ဳိ႕ေသာ က႑မ်ားကုိ ဒီတစ္နွစ္ထဲမွာ ျပန္လည္ၾကိဳးစားရယူနုိင္ျခင္း ရွိလာတတ္ပါတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ ..ျပန္လည္ၾကိဳးစားအားထုတ္ ေအာင္ျမင္နုိင္ေသာ ကံအေျခအေန ေရာက္ရွိေနခ်ိန္ပါ။
လူပ်ဳိအပ်ဳိမ်ားအဖုိ႔ ဖူးစာေရးနတ္ မ်က္နွာသာ ေပးတတ္ခ်ိန္ပါ။ မိမိစိတ္ကူးယဥ္ထားတဲ့ …ဖူးစာဖက္မ်ဳိးကုိ ကံတရားက ေဖးမေပး ..ေတြ႕ဆုံေပးလာတတ္ေသာကာလမုိ႔….အခ်ဳိ႕ေသာ ဗုဒၶဟူး/ရာဟု တုိ႔အတြက္ သည္တစ္နွစ္ကေတာ့….အေခ်ာအလွ..အယဥ္ ..ငယ္ငယ္ေခ်ာေခ်ာ (သုိ႔) စိတ္တုိင္းက် ..ဖူးစာဖက္မ်ဳိးနဲ႔ အတြဲေလးခ်ိတ္မိနုိင္ပါေသး။
ရာဟုဖြားေတြကေတာ့ မထင္မွတ္ပဲ ေကာက္ရသလုိ ေပၚလာမယ့္ ကုိယ္ထင္ထားတာထက္…အဆင္ေျပေနမယ့္ …အခ်စ္ေရးက႑မ်ဳိး ၾကံဳလြယ္တတ္ခ်ိန္ကာလပါ။
အိမ္ေထာင္သည္ အမ်ဳိးသား ရာဟုဖြား ျဖစ္မယ္ဆုိရင္ေတာ့…သည္တစ္နွစ္အဖုိ႔……မစလုိက္မိပါေစနဲ႔။ စလုိက္မိတာနဲ႔….နံပါတ္2က ….ဂ်ိတ္ကနဲ ခ်ိတ္သြားတတ္ပါေၾကာငး္။
ၾကာသာပေတးေန႔ဖြားတုိ႔ ကံဇာတာ (၁၃၇၉)
ၾကာသာပေတးေန႔ဖြား အေပါင္းတုိ႔သည္ …နွစ္သစ္ ၁၃၇၉ခုနွစ္အတြငး္ ကုိယ္စိတ္နွစ္ျဖာ က်န္းမာခ်မ္းသာျခင္း ရွိၾကသည္ ျဖစ္ၾကပါေစသတည္း။
ေသာၾကာေန႔ဖြားတုိ႔ ကံဇာတာ (၁၃၇၉)
ေသာၾကာျဂိဳဟ္သည္ …ယခုနွစ္အဖုိ႔….အထြန္းဌာနတြင္ မဟာဘုတ္ဥစ္ျဂိဳဟ္အျဖစ္ ….ရပ္တည္လာပါတယ္။
ေသာၾကာေန႔ဖြား ေတြ အတြက္ …ဒီတစ္ႏွစ္သည္…ေျခြရံသင္းပင္းမ်ားျခင္း၊ ေကာင္းေသာစားစရာ ၊ ၀တ္စားတန္ဆာတုိ႔ျဖင့္ ျပည့္စုံေစတတ္ျခင္း၊ စည္းစိမ္ခံစားရျခင္း …ပုိမုိရရွိလာတတ္ေသာ ကာလျဖစ္ပါတယ္။ အလားတူပင္….ေနရာေကာင္းရျခင္း၊ ေနရာေပးရျခင္း၊ ေကာင္းေသာဌာန၊ ေကာင္းေသာ ေနရာ၊ ေကာင္းေသာ အခြင့္အလမ္းအခ်ဳိ႕လည္း ရနုိင္ေသာ ကာလ ျဖစ္ပါတယ္။
အက်ဳိးစီးပြားရွာေဖြရာမွာ ေရွးကကဲ့သုိ႔မဟုတ္ဘဲဲ…လုပ္ရုိးလုပ္စဥ္အခ်ဳိ႕ကုိ ေျပာင္းလည္းရမယ့္ကာလျဖစ္ပါတယ္။ ဒီနွစ္အက်ဳိးစီးပြားရွာေဖြရရွိေရးနဲ႔…အလုပ္အကုိင္ က႑မွာ…ထင္သေလာက္မေကာင္းတတ္ပါ။ အခ်ဳိ႕ေသာ ေသာၾကာေန႔ဖြားမ်ား ..အလုပ္မွ ႏႈတ္ထြက္ရျခင္း၊ အနားယူရျခင္း ရွိနုိင္ေသာကာလ လည္းျဖစ္ပါတယ္။
ေရွးယခင္လုိ လြယ္လြယ္ကူကူမျဖစ္ေတာ့ဘဲ…အထစ္အေငါ့မ်ားျပားလာတတ္ခ်ိန္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
အခ်စ္ေရး ေမတၱာေရးမွာ ျပိဳင္ဘက္ရန္သူ ေပၚလြယ္ေသာကာလပါ။
အပ်ဳိလူပ်ဳိမ်ားအဖုိ႔…မိမိခ်စ္သူကုိ အျခားသူက လာၾကဴတာမ်ဳိး ၾကံဳရတတ္ျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း….မိမိက …အျခားသူတစ္ဦးရဲ႕ ခ်စ္သူကုိ …ျမတ္နုိးစုံမက္မိျခင္းမ်ဳိးေသာ္လည္းေကာင္း ….. ၾကံဳၾကိဳက္ၾကရတတ္ေသာ ကာလျဖစ္ပါတယ္။
တစ္ကယ္ကေတာ့…အခ်စ္ေရး ေမတၱာေရးမွာ….ယွဥ္ျပိဳင္ဘက္ ေပၚလာတတ္ေသာကံပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
အိမ္ေထာင္သည္မ်ား အဖုိ႔ ……မိမိေနအိမ္ကုိ သူစိမ္းသူရံ အရြယ္ေကာင္း အဂၤါေန႔ဖြား သုိ႔မဟုတ္ အဂၤါနံအမည္ရွင္မ်ဳိး …ညဥ္႔အိပ္ညဥ္႔ေန…သုိ႔မဟုတ္ ယာယီအတူေနအျဖစ္ ….မထားတာ ပုိသင့္ပါလိမ့္မယ္။
ဒီတစ္နွစ္မွာ….ဖူးစာေရးနတ္ကေလးက…..စစ္ဘက္၊ စက္မႈနယ္ပယ္ဘက္ သုိ႔မဟုတ္ ထက္ျမက္ထူးခၽြန္ေသာ…စိတ္ဆတ္ေသာ …ဖူးစာဖက္မ်ဳိးကုိ ….ခ်ိန္ရြယ္ပစ္ခတ္ေပးတတ္ေသာ ကာလပဲျဖစ္ပါတယ္။
မျပီးနုိင္မစီးနုိင္ ပညာေရး အေနအထား ျဖစ္ေပၚလြယ္ေ္သာ နွစ္ပါ။
အခ်ဳိ႕ကေတာ့ ပညာေရးမွာ ဘြဲ႕လြန္လုိမ်ဳိး……ဆက္ခါဆက္ခါ တက္ခြင့္ေတြ ရရွိၾကပါမယ္။
ဒီတစ္ႏွစ္သတိထားအပ္ေသာ နွစ္ပါ။ အာယုျဂိဳဟ္တနဂၤေႏြ နဲ႔ ပကၡအျဖစ္ ရပ္တည္ဆက္ႏြယ္ေနမယ့္ နွစ္ျဖစ္တာေၾကာင့္…သည္တစ္နွစ္….အဖုိ႔…က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ လုိအပ္ခ်က္ေလးေတြ ေပၚလြယ္လာတတ္ခ်ိန္ပါ။
ဦးေခါင္း၊ နွလုံး ၊ အရုိးအဆစ္ ပုိင္းဆုိင္ရာ ေ၀ဒနာအခံရွိထားသူမ်ား ပုိမုိဂရုစုိက္အပ္ေသာ နွစ္မ်ဳိး ျဖစ္ပါတယ္။
ေသာၾကာနံ အစ + အဆုံး အမည္ရွင္မ်ား / ဥပမာအားျဖင့္ ….သြယ္သြယ္ဟန္၊ သီတာျမင့္သူ၊ သန္းထုိက္မုိးဟိန္း၊ ေသာ္ဇင္ဟိန္း စသည္ျဖင့္ ့ေသာ အမည္ရွင္မ်ား အဖုိ႔ က်န္းမာေရး ပုိမုိဂရုစုိက္အပ္ေသာ နွစ္မ်ဳိးပါ။ ..
ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ အျခားေသာၾကာေန႔ဖြားေတြလညး္ ဒီတစ္နွစ္က်န္းမာေရးသည္ ..အထူးဂရုျပဳရမယ့္ နွစ္မ်ဳိးျဖစ္ပါတယ္။
အေထာက္အပံ႔ေကာင္းရလြယ္ျခင္း၊ ေနရာေကာင္းရတတ္ျခင္း၊ ေနရာေပးခံရျခင္း၊ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံေကာင္းမ်ား အလုိလုိ ရရွိတတ္ျခင္း ဆုိတဲ့ ကုသုိလ္ကံအက်ဳဳိးေပးေလးေတြ ေပၚေပါက္လာတတ္ေသာ ကာလ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ …ဒီအက်ဳိးေပးကံေလးကုိ….အက်ဳိးရွိရွိအသုံးခ်သင့္ပါတယ္။
အလုပ္အကုိင္ေတြကေတာ့ ထင္သလုိမျဖစ္တတ္ခ်ိန္မုိ႔….ယခင္ထက္ပုိမုိၾကိဳးစားေနကာမွ ေတာ္ရုံၾကမယ့္ကာလပါ။
အိမ္ေထာင္ေရးဆုိးတတ္ေသာကာလမဟုတ္ေသာ္လည္း…ရန္ကိန္းေလး ေတြေပၚလြယ္တတ္ခ်ိန္ပါ။ အထူးသျဖင့္ မိမိတုိ႔အိမ္ေထာင္ဖက္ သုိ႔မဟုတ္ ခ်စ္သူသည္ ခါတုိင္းနဲ႔မတူပဲ..စိတ္တုိ စိတ္ဆတ္လာတတ္ပါတယ္။
အိမ္နီးနားခ်င္းတုိ႔ရဲ႕ အက်ဳိးကုိ ခံစားရတတ္ပါတယ္။
ဒီတစ္နွစ္မွာ…..အလုိလုိေနရာေကာင္းရရွိခြင့္ကံ နဲ႔…..အေထာက္အပံ႔ေကာင္းရရွိတတ္ေသာ ကံ တုိ႔နဲ႔ ….ဆုံမိရင္ေတာ့…သက္ေတာင့္သက္သာ ေမ်ာလုိက္ျပီး …အဆင္ေျပမွာ ေသခ်ာပါတယ္။
ကုိယ္တုိင္ထြင္ေဖာက္ ထြင္ေလွ်ာက္ဖုိ႔ကေတာ့ တယ္မလြယ္လွတဲ့ နွစ္ပါပဲ။
အခ်ဳိ႕ေသာ ေသာၾကာေန႔ဖြားမ်ား…ရာထူးတုိးတက္ေရး…က႑မွာ မျပတ္မသားနဲ႔ ရမလုိလုိ မရမလုိလုိ….လုိလုိ…လုိလုိ စခမ္းသြားရပါလိမ့္မယ္။
ဒီတစ္နွစ္လုံးမွာ ….ေသာၾကာနံနဲ႔ ၾကာသာပေတးနံတုိ႔ အထူးအက်ဳိးေပးလာတတ္ပါတယ္။
ခရမ္း၊ ခရမး္ျပာ နဲ႔ …၀ါေရႊေရာင္၊ နံ႔သာေရာင္တုိ႔သည္ …အထူးအက်ဳိးေပးေသာ အေရာင္မ်ားအျဖစ္ ရပ္တည္မွာျဖစ္ျပီး…….
အိမ္ေထာင္ေရး အခ်စ္ေရးအဆင္မေျပျဖစ္ေနၾကသူမ်ားကေတာ့ အနီရဲရဲအေရာင္ကုိ အထူးေရွာင္က်ဥ္ဖုိ႔လုိပါလိမ့္မယ္။
ထီကံစမ္းမယ္ဆုိရင္ ၆ ၊ ၅ ၊ ၂၊ ၉၊ နဲ႔ ..(၃) ဂဏန္းကုိ ေနာက္ဆုံးမွာတြဲျပီး..မိမိေနရာအရပ္နဲ႔ နဲဲနဲေ၀းေသာ ဆုိင္တစ္ဆုိင္ ကေန ကံစမ္းသင့္ခ်ိန္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း………….။
ယခုနွစ္ ၁၃၇၉ခုနွစ္ အတြင္း …ေသာၾကာေန႔ဖြား အေပါင္း သူေတာ္ေကာင္းတုိ႔သည္….စိတ္၏ က်န္းမာျခင္း ..ကုိယ္၏ က်န္းမာျခင္းနွင့္ ျပည့္စုံျပီး…..ေလာကီအက်ဳိး ၊ ေလာကုတၱရာအက်ဳိး…သယ္ပုိးနုိင္ၾကသည္ ျဖစ္ၾကပါေစသတည္း။
ခ်စ္၍ခင္၍ ေပးေသာ လာဘ္မ်ဳိး…၀င္လြယ္ေသာ အခ်ိန္ပါ။ ပ်ဳိရြယ္သူအဖုိ႔ တုိးတုိးတိတ္တိတ္လက္ထပ္ျခင္းမ်ဳိးျဖစ္ေစ…၊ လူနဲစုနဲ႔အက်ဥ္းရုံးလက္ထပ္ျခင္းမ်ဳိးျဖစ္ေစ…ၾကံဳလြယ္ေသာကာလမ်ဳိးလည္း
တနင်္ဂနွေ နေ့ဖွား ကံဇာတာ (၁၃၇၉)
တနင်္ဂနွေနေ့ဖွားတွေ အားလုံးနီးနီးအတွက် ဒီနှစ်သစ်ကတော့ ……လူချစ်လူခင်များမယ့် နှစ်တစ်နှစ်ပါပဲ။
တနည်းအားဖြင့် စန်းပွင့်မယ့် နှစ်တစ်နှစ်လို့ ဆိုကြပါစို့။
အလုပ်အကိုင် နှင့် စီးပွားရေး
မနှစ်က ရှာရဖွေရ…ခက်ခဲ့သမျှ….လွယ်လွယ်နဲ့မရခဲ့သမျှ…၊ ဒီတစ်နှစ်တော့ ..ရေကန်အသင့် ကြာအသင့် အနေအထားလေးတွေလည်း ပါလာနိုင်ပါတယ်။ ဘေးကျပ်နံကျပ်အခြေအနေ အနဲငယ်ကြုံနိုင်ပေမယ့်….အသက်မွေးမှုမှာ ကူညီပေးမယ့် ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်း ပေါ်လာတတ်ချိန်ပါ။ ခက်တာက………….
ဒီတစ်နှစ်ထဲမှာ ကိုယ်တိုင်က….နဲနဲ ပေါ့လျော့နေမိတတ်ပါတယ်။ အရင်နှစ်တွေလို….ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြိုးစားလို့ သိပ်မရဘဲ…အပျော်အပါးဘက်ပဲ ဖြစ်စေ…၊ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပဲ ဖြစ်စေ…၊ ဘာမှ သိပ်လေးလေးနက်နက် လုပ်လို့မရဘဲ ဖြစ်စေ… ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။
အလေးအနက်ကြီးထားပြီး လုပ်ပြန်တော့လည်း …လုပ်သမျှက လမ်းတစ်ဝက်မှာ ပဲ ….အကြံပြတ်သွားနေတတ်ပါတယ်။
ဆိုတော့ ဒီတစ်နှစ်ကတော့….အရိပ်အခြေကြည့်ပြီး…ကောင်းတဲ့ကံလေးပေါ်လာချိန်မှာ မျောလိုက်နေရမယ့် နှစ်မျိုးဆန်ပါလိမ့်မယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မနှစ်ကနဲ့စာရင်တော့ …ဒီတစ်နှစ်ဟာ ..အများစုသော တနင်္ဂနွေနေ့ဖွားတွေအတွက် …သက်တောင့်သက်သာ ပိုမိုရှိကြပါလိမ့်မယ်။
ချစ်မှုရေးရာ နှင့် အိမ်ထောင်ရေး
အသည်းစွဲအောင် ချစ်မိလောက်စရာ ပေါ်လာတတ်သော နှစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။
လူပျို အပျိုတို့အဖို့….အချစ်ကို လက််တဲ့မစမ်းမိလိုက်နဲ့….တစ်ကယ်မြတ်နိုးမိ…စွဲမိစေမယ့် အချစ်မျိုး ကြုံသွားနိုင်တဲ့ နှစ်ပါ။ အလိုလိုနေရင်း တစ်စိမ့်စိမ့်ချစ်မိ….လိုလားတပ်မက်မိစေမယ့် …..အချစ်နတ်သမီး ဗီးနပ်စ်ရဲ့ ညှိ့ကြိုးမိနေတဲ့ နှစ်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။
အိမ်ထောင်သည်တွေအဖို့ကတော့…..ချစ်ဒုက္ခကို ပိုမိုခံစားရနိုင်ကိန်းရှိပါတယ်။ အကြောင်းအားလျော်စွာ ချစ်လျက်နဲ့ခွဲနေရခြင်းမျိုးလေးတွေ သော်လညး်ကောင်း
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ရုပ်ပိုင်းဝေးကွာရမှု အခိုက်အတန့်ကို သီးခံနိုင်ကြဖို့လိုပါတယ်။ စိတ်ပိုင်းဝေးကွားသွားရမှု ..စိတ်သဘောထားမတိုက်ဆိုင် အချင်းများရမှုတွေထက်စာရင်…..အများကြီးသက်သာလို့ပါပဲ။
ပညာသင်ကြားခွင့်ကံ တွေ ပွင့်လန်းနေတဲ့ ကာလတစ်ခုပါ။ ပညာသင်ယူခွင့်တွေ အလိုလိုရရှိနေတတ်ပါတယ်။ အတန်းပညာပဲဖြစ်ဖြစ်…ပြင်ပသင်တန်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ် …အလိုလို တက်ခွင့် သင့်ခွင့်တွေ ကျရောက်လာပါမယ်။ ပညာရေး ကံ အားသာသည့် နှစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။
အမျိုးသမီးများ …သားအိမ် နှင့် ပတ်သက်ပြီးဖြစ်စေ…မွေးလမ်းကြောင်းနဲ့..မအင်္ဂါ ဆိုင်ရာ ရောဂါဘယ အသေးစားမျိုးတို့ ဖြစ်စေ…ကပ်ငြိလွယ်တတ်သော ကာလပါ။ အထူးသဖြင့် ..ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ နဲ့ တနင်္ဂနွေနေ့တို့မှာ ပိုမိုဂရုစိုက်ကြရပါမယ်။ ဆေးဝါးအစားအစာ တစ်မျိုးမျိုးရဲ့ ဘေးထွက်အာနိသင်ကြောင့်ဖြစ်စေ…အဆိုပါ…ဥပါဒ်မျိုးကို ကြုံတွေ့ရကြတတ်တာကိုလည်း …သတိပြုရပါမယ်။
ကျားမ မရွေး ..အသည်း နဲ့ ပတ်သက်ပြီးလည်း …ရောဂါဘယ အနဲငယ် ဖြစ်ပွားစေလွယ်သော ကာလဖြစ်ပါတယ်။
ပျော်သလိုနေပါကွယ့် ဆိုတဲ့ကာလပါ။ ခရီးယာယီတွေ ပေါပါမယ်။ ကြားသုံးကြား…..တင်မက….၊ ကြားမှန်သမျှ အကုန်ဝင်ပါနေရပါမယ်။
ဟိုကြားထဲ ပါလိုက်ရ…သည်ကြားထဲ ၀င်လိုက်ရ နဲ့…..ကိုကိုကြား၊ မမကြားတွေတောင် …ဖြစ်ရတတ်တဲ့ နှစ်မျိုးပါ။
ဆိုတော့….ဒီတစ်နှစ် မှာ တနင်္ဂနွေနေ့ဖွားတွေ အဖို့….ကြားဝင်ဆောင်ရွက်ပေးရသော လုပ်ငန်းဆောင်တာများနဲ့ အသက်မွေးမယ်ဆိုရင် …အလွန်ကောင်းပါသဗျာ။
လူပေါင်းများစွာဟာ တနင်္ဂနွေနေ့ဖွားတွေကို မြင်လိုက်တာနဲဲ့ကို….
ကြားခံအဖြစ် အသုံးပြု…အကျိုးဆောင်ပေးရန်...တောင်းဆိုမှု ပြုလာတတ်ပါတယ်။
လောကီအာရုံကာမဂုဏ်က ဖျားယောင်းလာမယ့် နှစ်တစ်နှစ်ပါ။
အင်မတန် အိမ်တွင်းပုံး ပြီး ရိုးရိုးကုပ်ကုပ်နေတတ်သူတွေတောင်….ဒီတစ်နှစ်တော့ သောကြာဂြိုဟ်ရဲ့ ဖျားယောင်းမှုကြောင့်….ဆန်းဆန်းပြားပြား သရိုးသရီ..ခံစားမှုတွေ သက်ရောက်လာစေတတ်ပါတယ်။
တနင်္ဂနွေနေ့ဖွားတွေ အတွက် ဒီတစ်နှစ် အကျိုးအပေးနိုင်ဆုံး ဂြိုဟ်ကတော့ ကြာသာပတေးဂြိုဟ် ဖြစ်ပြီး…..ဆိုးကျိုးအပြုနိုင်ဆုံး ဂြိုဟ်ကတော့ အင်္ဂါဂြိုဟ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
စသော အနီးအစပ် ပတ်ဝန်းကျင်တွေနဲ့ သဟဇာတဖြစ်မှု နဲပါးရတတ်ခြင်း သော်လည်းကောင်း…သို့မဟုတ်/
ထို အနီးနားချင်းတွေ ပျက်ဆီးထိခိုက်ခြင်းများကိုသော်လည်းကောင်း…
မြင်ရတွေ့ရမယ့် ကာလတစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
အနီရဲရဲအရောင် နဲ့ အရှေ့တောင်စူးစူးအရပ်တို့ကို အဓိကရှောင်ကျဉ်သင့်ပါတယ်။
ဒုတိယအားဖြင့်ကတော့ အနက်ရောင် နဲ့ အနောက်တောင့်အရပ်တို့ ဖြစ်ပါတယ်။
နံ့သာရောင် နဲ့ ၀ါညိုရောင် ကတော့ အကျိုးပေးအရောင်ဖြစ်ပြီး…အနောက်စူးစူးအရပ်ကနေ အကျိုးပေးတတ်ပါတယ်။
ငွေသားစစ်စစ် ဖလားလေးတစ်ခုကို ဧည့်ခန်း မှာ ထားသင့်သော နှစ်ကောင်းမွန်မြတ်တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျား။
တနင်္ဂနွေနေ့ဖွား များ အားလုံး ကျန်းမာချမ်းသာခြင်း …၊ လောကီအကျိုးစီးပွား ….လောကုတ္တရာ အကျိုးစီးပွား နှစ်ဖြာသောအကျိုး တိုးတက်နိုင်ကြခြင်း ရှိကြသည် ဖြစ်ကြပါစေသတည်း။
တနင်္လာနေ့ဖွား တို့ ကံဇာတာ (၁၃၇၉)
တနင်္လာနေ့ဖွားတွေ အများစု အတွက်…
မနှစ်က တုန်းက တနင်္လာနေ့ဖွားတွေ….အနိမ်ခံရ၊ အပယ်ခံရ၊ အမုန်းခံရ…များခဲ့သမျှ…..ဒီတစ်နှစ်တော့….
အကျိုးစီးပွား ရှာဖွေရရှိရေးမှာ….တစ်ခုတော့ အခက်တွေ့ကြပါမယ်။ ဘာလဲဆိုတော့…ခါတိုင်းလို…လွယ်လွယ် နီးနီး က နေ ရှာဖွေလို့မရတတ်ဘဲ… ဝေးဝေးကနေ….အနဲငယ်ခဲရာခဲစစ် ကြိုးစားရှာရမယ့်အချိန်ပါ။ တနည်းအားဖြင့် စိတ်ရှည်မှုသည် …သည်တစ်နှစ်အတွက် …အကျိုးစီးပွားရှာဖွေ ရရှိရေးမှာ အလွန် အရေးကြီးပါလိမ့်မယ်။
ဥပမာအားဖြင့် ၀န်ထမ်းတွေဆို…..နယ်ဘက်၊ အစွန်အဖျားကျသောဒေသများ၊ ပုံမှန်လုပ်နေကြ ဌာနမျိုးမဟုတ်သော…
လုပ်ငန်းမျိုးမဟုတ်သော…လုပ်ငန်းတာဝန်များ ….နေရာဒေသများကို ပြောင်းရွှေ့ကြရတတ်ချိန်မျိုး ဖြစ်နေပါတယ်။
သို့သော် …မိမိတို့ကို နောက်ကနေ ကျောထောက်နောက်ခံပေးမယ့်….
ဘက်ဂရောင်းကောင်းကောင်းတွေ ရတတ်သော အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။
ချစ်လို့ခင်လို့ နေရာပေးခံရတတ်သော ကံကောင်းမှုမျိုး ကြုံရတတ်ချိန်လို့လည်း ဆိုနိုင်ပါတယ်။
မေတ္တာရေး အချစ်ရေး…ကပြောင်းကပြန် အပြောင်းအလည်းတွေ ကျရောက်လွယ်တတ်သော ကာလဖြစ်ပါတယ်။
အထူးသဖြင့် ပျိုရွယ်သူ လူပျိုအပျို ..လူလွတ်တွေအဖို့…..
သမီးရည်းစားရေးရာကဏ္ဍ မှာ အပြောင်းအလည်း တွေ ဖြစ်လွယ်တတ်ချိန်ပါ။
နောက်တစ်ယောက်ပေါ်လာတာနဲ့…ပထမတစ်ဦးနဲ့ ..ပြသနာဖြစ်လွယ်သော အချိန်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဆိုတော့…ဒီနှစ်မျိုးသည်…….
မုန့်စားရင်း လှည်းစီး…ငါးရံနှစ်ကောင် သေသေဝပ်ဝပ်နဲ့ တစ်ပြိုက်နက် ဖမ်းလို့ရနိုင်သော ကာလမျိုးမဟုတ်ပါ။
ဒုတိယတစ်ယောက်ချဉ်းကပ်လာတာနဲ့ ပထမတစ်ယောက်နဲ့ ပြသနာ…တက်နိုင်ဖို့ သေချာနေသော ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်။
အထူးသဖြင့် နာမည်အဖျားစာလုံး…(အဆုံးစာလုံး) စနေနံဖြင့်မှည့်ခေါ်ထားသော အမည်ပိုင်ရှင်များ…၊ ဥပမာ…ကျော်ကျော်ထွန်း၊ ကျော်ဇင်ထွန်း၊ ချစ်နှင်းနွယ်၊ စန်းစန်းထွေး..စသည်။
စသည်ဖြင့်သော အမည်ရှင်မျိုးတွေမှာ…မေတ္တာရေး အပြောင်းအလည်း ကဏ္ဍ ဖြစ်ပွားရန် လွယ်ကူနေသော ကာလ ဖြစ်ပါတယ်။
အနက်ရောင်သည်…ယခုနှစ်တစ်နှစ်လုံးအတွက် မေတ္တာရေး ၊ အိမ်ထောင်ရေးကို အနှောက်အယှက် ပြုနိုင်သော အရောင်ဖြစ်တာမို့ ..တစ်နှစ်လုံးအထူးရှောင်ကျဉ်သင့်လှပါတယ်။
ဆရာသမားတွေနဲ့ …ပညာရှင်ဆိုသူတွေနဲ့….အတိုက်အခံ ဖြစ်လွယ်သော ကာလပါ။ သတိပြုပါမယ်။
သင်တန်းတွေ၊ သင်ကြားခွင့်ကံတွေ ဘ-က်မှာတော့ ကောင်းလှပါတယ်။
ကိုယ်ဘယ်လောက်ကြိုးစားသည်ဖြစ်စေ…..ရသင့်သလောက် ဂုဏ်ထူး ဘွဲထူး..ရနိုင်ဖို့တော့ခက်ခဲတတ်ပါတယ်။ ဒူးလောက်တင်မှ ရင်လောက်ကျမယ့်ကာလ တစ်ခုပါ။
ပညာရေးကဏ္ဍမှာလည်း ကိုယ်ထင်ထားတာတစ်ချို့နဲ့ တက်တက်စင်အောင် လွဲချော်ရတတ်မှုတွေ ရှိနေတတ်ပါတယ်။
သင့်အဆင့်မျှသာ သဘောထားရမယ့် ကာလ ဆိုကြပါစို့။
လေဖြတ်ခြင်း …လေဖြန်းခြင်း အနဲငယ်ဂရုစိုက်အပ်သောကာလဖြစ်ပါတယ်။
ခါတိုင်းလိုမဟုတ်ပဲ…ကျန်းမာရေး အနဲငယ် အကဲဆတ်ချင််တဲ့ ကာလပါ။
အရေပြား၊ လေရှုပြွန် နဲ့ အဆုတ်ဝေဒနာများ၊ အာရုံကြောများ ပင်ပန်းနွမ်းခြင်း များ ဒဏ် ခံရလွယ်တတ်ချိန်ပါ။
အထူးသဖြင့် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့များသည် ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်ကျဆင်းလွယ်နေစေတတ်ပါတယ်။
နေရာပေးခံရမှုတွေကို ဂရုစိုက်ပါ။ ရလာတဲ့ အခွင့်အလမ်းပေါ်မှာ…အကျိုးရှိအောင် အသုံးချတတ်ရပါမယ်။
ရရှိလာနိုင်တဲ့ နေရာပေးခံရမှု….အထောက်ပံ့ကောင်း စသည်တို့သည် ချစ်ခင်ရင်းစွဲ အပေါ်မူတည်ပြီး ….ရရှိလာနိုင်ပါတယ်။
အထူးသဖြင့် နာမည်အဖျားစာလုံး သောကြာနံ ဖြင့် မှည်ခေါ်ထားသော
ဥပမာအားဖြင့် …ကျော်ကျော်သိန်း၊ ခင်စန္ဒာသော်၊ မျိုးမျိုးသွင်၊ စန်းသီတာသော်၊ စသည်ဖြင့်သော အမည်ရှင်မျိုးတွေမှာ…..
မုချ အခွင့်အလမ်းကောင်း၊ အထောက်အပံ့ကောင်း၊နေရာကောင်း ရလွယ်နေပါလိမ့်မယ်။
အကျိုးခံစားရလွယ်သော ကာလပါ။ မရှာဘဲရတဲ့အကျိုးမျုူိးက ပိုမိုထက်သန်နေပါမယ်။ ကိုယ်ရှာဖွေလိုက်တာမျိုးကျတော့ အခက်အခဲနဲ့ စိတ်ရှည်သီးခံရမှုတွေ ပါ၀င်နေပါမယ်။
အရမ်းစူးစိုက်မိနေတဲ့ …အာရုံစူးစိုက်မှုတွေကြောင့် …အာရုံကြောပင်ပန်းနွမ်းနယ်ရတတ်ပါတယ်။
လူလိမ်လူကောက် ရန်ကို လည်း သတိထားအပ်သော အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။
ကြွေးမြီကဏ္ဍတွေကိုု လည်း သတိထားပြီး ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရမယ့်ကာလပါ။
ချေးငှားလို့ လွယ်သလို…ကြွေးအမြောက်အများလည်း တင်လွယ်နေတတ်ပါတယ်။
တင်ပြီးသွားရင်လည်း…..ဗွက်ပေါက်မသွားအောင် ထိမ်းနိုင်ဖို့ ခက်တဲ့ကာလပါ။
ဒါကြောင့် လွယ်လွယ်ချေးငှားရတိုင်း မလိုအပ်ဘဲ..အကြွေးမယူမိဖို့လိုပါတယ်။
ခါတိုင်းနှစ်တွေလို…ဆူလွယ်နပ်လွယ် အကျိုးစီးပွားမျိုး မျှော်မှန်းခွင့် လုံးဝမရှိသည့်ကာလဖြစ်ပါတယ်။
ဆိုးကျိုးအပေးနိုင်ဆုံးဂြိုဟ်သည် ဗုဒ္ဓဟူး/ရာဟု ဖြစ်ပါတယ်။
အစိမ်းရောင်အမျိုးမျိုးကို သတိပြုပြီးသုံးစွဲအပ်သလို…အနောက်မြောက်အရပ်ဒေသကိုလည်း အသွားအလာ ဆင်ခြင်ရမယ့် အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။
သောကြာဂြိုဟ်ကတော့ တစ်နှစ်တာကာလပတ်လုံး အကျိုးပေးအား အကောင်းဆုံးအဖြစ် ရပ်တည်မှာ ဖြစ်လို့……
ခရမ်းပြာရောင် သည် ..ကံကောင်းစေတတ်သော အရောင်ဖြစ်သလို…
မြောက်စူးစူးအရပ်သည်လည်း လာဘ်လာဘနဲ့ အထောက်အပံ့ကောင်းကို ဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်။
အားကောင်းသော သံလိုက်တုံးလေး တစ်တုံးကို ခရမ််းပြာရောင် ကတ္တီပါစလေးနဲ့ ထုပ်ပြီး ဆောင်ထားသင့်လှပါတယ်ခင်ဗျား။
လောကီအကျိုးစီးပွား…လောကုတ္တရာအကျိုးစီးပွား နှစ်ဖြာကို….မျှတစွာ ရရှိနိုင်ကြသည်ဖြစ်သော……………..
နှစ်ကောင်းနှစ်မြတ်တစ်ခု အဖြစ် ဖြတ်သန်းနိုင်ကြပါစေသတည်း။
အင်္ဂါနေ့ဖွားတို့ ကံဇာတာ (၁၃၇၉)
ဒီတစ်နှစ်ကတော့ အင်္ဂါနေ့ဖွားတွေ….ရုန်းရ ကန်ရ…ပင်ပန်းရမယ့်နှစ်ပါပဲ။
လူတွေကလည်း ကိုယ့်ကို မြင်လိုက်တာနဲ့ကို ဘာခိုင်းရမလဲ၊ ဘာအကျိုးဆောင်ခိုင်းရမလဲ။ ဘယ်လိုနင်းလိုက်ရမလဲ…တွေးထင်...မြင်ယောင်မိနေကြမယ့်နှစ်ပါပဲ။
မာနတွေကို ခဝါချနိုင်သလောက် ချပြီး…အခမဲ့အကျိုးဆောင်မှုတွေ ဖောဖောသီသီသာ လုပ်ပေးနိုင်ဖို့ ပြင်ထားကြပေတော့ခင်ဗျား။
အလုပ်တစ်ခုလုပ်လက်စ မပြီးသေးမီ..နောက်တစ်ခုကို ပြောင်းလုပ်လိုက်ရတတ်သော နှစ်မျိုးပါ။ ဟိုဟာလည်း မပြီးသေး…၊ သည်ဟာလည်း အဆုံးထိမရောက် …တောင်ပြေးလုပ်လိုက်ရ…မြောက်ပြေးလုပ်လိုက်ရ ဖြစ်တတ်သော နှစ်မျိုးလို့ ဆိုပါစို့။
အလုပ်မဆိုးပါ။ အလုပ်တွေ ကို အပြိုင်အဆိုင် အတိုက်အခံ များလာသည်အထိကို …လုပ်နေရတတ်ပါသေးတယ်။
ဒီတစ်နှစ်ထူးခြားတာက…အကျိုးစီးပွား ရှာဖွေရေးမှန်သမျှမှာ..အင်္ဂါနေ့ဖွားတွေအဖို့…အပြိုင်အဆိုင် ကင်းသည်ဟူပြီးမရှိသလောက် …ကို….ရန်သူပြိုင်ဘက်တွေ များလာနိုင်ခြင်းပါပဲ။
ဘယ်လောက်ပဲ အလုပ်နဲ့ စီးပွားရေးမှာ…ကောင်းနေပါစေဦး..အခမဲ့အကျိုးဆောင်ပေးမှုလေးတွေလည်း ..လုပ်ကိုလုပ်ပေးသင့်တဲ့နှစ်မျိုးပါ။ မလုပ်ပေးမိရင်တော့….ရည်ရွယ်ချက်တစ်ချို့ ပျက်ရတာတွေ၊ ဆုံးရှုံးရတာလေးတွေလည်း တွဲပါလာပါလိမ့်မယ်။
ချစ်မှုရေးရာ…မှာ ပွေလီလွယ်တတ်သော ကာလမျိုးပါ။ မုန့်စားရင်းလှည်းစီး..ငါးရံနှစ်ကောင်ဖမ်း ဇာတ်လမ်းမျိုးလေးတွေ ..ကြုံလွယ် ဖြစ်လွယ်သော ကာလလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။
တိတ်တိတ်ပုန်း ဇာတ်လမ်းမှာ …မင်းသားမင်းသမီး ဖြစ်လိုက်တာနဲ့…
ရှေ့လာမယ့် ၁၃၈၀ နှစ်ထဲမှာ မေတ္တာရေး ကမောက်ကမ ဖြစ်ဖို့ အတွက် စရံသပ်လိုက်သလိုပဲ သေချာသွားနိုင်ပါတယ်။ ဒီတစ်နှစ်လုပ်မိိမယ့် အမှားတွေရဲ့ နောက်ဆက်တွဲရလာဒ်ကို…နောက်တစ်နှစ် ၁၃၈၀ မှာ အဖြေပြန်ထွက်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
လူပျိုအပျိုတွေ မှာ ..ချစ်မှု ရေးရာကဏ္ဍ မှာ ရွေးရခက်စရာအခြေအနေတွေ ပေါ်ပေါက်နိုင်သလို…..
အိမ်ထောင်သည် တွေ အဖို့…ပိုတောင်ဂရုစိုက်ရပါလိမ့်မယ်။
မူလဇာတာမှာ အိမ်ထောင်ရေးကံ ကြံ့ခိုင်သူအဖို့ ဒီတစ်နှစ်သည် ပြသနာမရှိပေမယ့်…၊ မူလဇာတာမှာကတည်းက အိမ်ထောင်ရေးနဲ့ ချစ်မှုပွေတတ်သော ကံပါလာသူများအဖို့ကတော့…သည်တစ်နှစ်မှာ မုချ ကြိတ်ကြိတ်..တိုးတိုး..လျှှို့ဝှက်ဇာတ်လမ်းလေးတွေ ပေါ်ပေါက်လာနိုင်ပါတယ်။
မူလဇာတာ ကြံ့ခိုင်သူတွေမှာတော့….အိမ်ထောင်ဘက်ဖြစ်သူ ခရီးယာယီများပြားခြင်း မျိုး ဖြစ်လာတာကို ထူးခြားမှု ကြုံလာရတတ်ပါတယ်။
ဘာပဲပြောပြော သည်တစ်နှစ်ကတော့ အင်္ဂါနေ့ဖွားတွေအဖို့ အချစ် အတက် ထွက်လွယ်စေသော နှစ်တစ်နှစ်ပါပဲ။
မနှစ်က ပညာသင်ကြားရေးဆိုင်ရာတွေမှာ အခက်အခဲ များခဲ့သမျှ…ဒီတစ်နှစ် ပြန်လည်ပြီး အခွင့်အလမ်းကောင်းတွေ ပြန်လည်ပေါ်ပေါက်လာနိုင်ပါပြီ။
သင်တန်းကောင်းတွေ၊ ကောင်းသောသင်ကြားခွင့်တွေ ပြန်လည်ရရှိတတ်သော ကာလပါ။
မထင်မှတ်ဘဲ…ပညာရှင်များရဲ့ ပံ့ပိုးမှုကိုလည်း ရလွယ်သော ကာလဖြစ်ပါတယ်။
အလွန်ကျဆင်းလွယ်သော နှစ်ပါ။ တစ်နှစ်လုံး…သတိကပ်ထားမှ တော်ရုံကျမယ့်နှစ်ပါ။
အလိုလိုခွန်အားဆုတ်ယုတ်နေတတ်ခြင်း၊ အဆုတ် နှင့် လေရှုပြွန်ဥပါဒ်၊ ၀မ်းရင် ဥပါဒ်ပေးခြင်း၊ လေကြောင့် ဥပါဒ်ပေးခြင်း၊ အာရုံကြောပင်ပန်းနွမ်းနယ်တတ်ခြင်းတွေ..အထူးဂရုစိုက်မယ့်နှစ်မျိုးပါ။
နဂိုကတည်းက အတက်ရောဂါ ရှိသူတွေ ဒီနှစ်မုချ …ရောဂါလက္ခဏာ ပြန်ပေါ်လာပါမယ်။ သတိပြုရပါလိမ့်မယ်။
လူတွေက ကိုယ့်ကို မြင်တာနဲ့ ခိုင်းချင် လာပါမယ်။ လုပ်ပေးနိုင်တာ ဆိုရင် ..အခမဲ့ပဲ ဖြစ်ဖြစ်…စေတနာ့ဝန်ထမ်းလုပ်ပေးလိုက်သင့်သော နှစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။
သူတစ်ပါးအကျိုးဆောင်မှ…ကိုယ့်အကျိုးအောင်မယ့် …အရှင်းဆုံး ဥပမာနဲ့ ကိုက်ညီနေသော နှစ်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။
အတ္တဟိတ အကျိုးစီးပွားအတွက် ရှေးရှုလိုက်တိုင်းမှာတော့…..နေရာတိုင်းမှာ အပြိုင်အဆိုင်ပါလာပါမယ်။
လူပုဂ္ဂိုလ်တွေမပြောနဲ့ သာသနာ့ဘောင်က ရဟန်းတွေမှာတောင် ..အင်္ဂါနေ့ဖွားရဟန်းတော်များအဖို့ လောကုတ္တရာအကျိုးစီးပွား ရှာဖွေရာမှာ…အနှောက်အယှက် ရန် မကင်းဘဲ ဖြစ်ရတတ်ချိန်ပါ။ (လေ့လာကြည့်ပါ)။
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအဖို့…ဒီတစ်နှစ်မှာ အမျှကုသိုလ်များများဝေပါ။ ဘာကောင်းမှုပဲ ပြုမိသည်ဖြစ်စေ…မမေ့မလျော့အမျှဝေပေးပါ။
ပရလောကမှ …လိုအပ်နေသူအချို့ က…မိမိတို့ဆီမှ အမျှပေးမှုကို မျှော်လင့်နေတတ်သော နှစ်မျိုး ဖြစ််လို့ပါပဲ။
ဒီတစ်နှစ်…မှာ…လိုအပ်ရင် အနားယူပါ။ လောဘမကြီးပါနဲ့။
ကိုယ်တိုင်က ….နားချိန်မပေးရင်…၊ သဘာဝတရားက ကိုယ့်ကို နားပစ်ပါလိမ့်မယ်။
အလုပ်ကနေ ခွင့်ယူသင့်ရင်ယူပါ။ (ခွက်ရက်ရှည်အထိယူပစ်ပါ။)
ဒီနေရာမှာ ဖြုန်း်ဆိုတာကို ဘာကြောင့်သုံးရသလဲ ဆိုတော့…အချိန်တစ်ချို့ မုချလေလွင့် ဆုံးရှုံးနိုင်တဲ့ နှစ်မျိုးဖြစ်လို့ပါပဲ။
ဆိုတော့…လွတ်ကျမှာနဲ့စာရင် သေချာစနစ်တစ်ကျ လွှတ်ချပါ။
အချိန်ဖြုန်းရာမှာ….မိမိသူတစ်ပါး မထိခိုက်စေမယ့်နည်းနဲ့….အများအတွက်ကောင်းကျိုးဖြစ်စေမယ့််နည်းနဲ့ ဖြုန်းလိုက်ပါ။
ကိုယ်ပိုင်အချိန်တစ်ချို့ ဆုံးရှုံးသွားပေမယ့် အများအတွက် အကျိုးဖြစ်ေ်စမယ်ဆိုရင်…ဒီတစ်နှစ်မှာ ကြုံလာနိုင်တဲ့…မျှော်လင့်ထားသမျှတက်တက်စင်အောင် လွဲကုန်တတ်ခြင်း ကံကို…..မုချ သက်သာသွားပါလိမ့်မယ်။
ဒီတစ်နှစ်က အင်္ဂါနေ့ဖွားတွေအတွက် အပယ်ခံနှစ်၊ အနင်းခံနှစ်၊ အမုန်းခံနှစ် လို့လည်း ဆိုနိုင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ကိုယ်ကျိုးစီးပွားကိုရှေ့တန်းတင်လေလေ……..ထိုကံမျိုး တည့်တည့်သင့်လာတတ်လေလေပါပဲ။
ပရဟိတ အကျိုးစီးပွားကို ရှေးရှုမယ်ဆိုရင်တော့…..လွန်ကဲလှစွာ နဲ့ပဲ……နွံထဲက ကြာပမာ…..ပြန်လည်တင့်တည်လာမည်ဖြစ်ပါကြောင်း။
ဒီတစ်နှစ် အားအရလောက်ဆုံး အကျိုးပြုသည့်ဘက်ကို ပါလာနိုင်တဲ့ ဂြိုဟ်ကောင်းကတော့ ကြာသာပတေးဂြိုဟ် (ဘုမ္မိ) ဂြိုဟ်ပါ။
အင်္ဂါနေ့ဖွားတွေ အတွက် မူလတြိရန်း မို့ အကျိုးပေးအား မသန့်ရှင်းသည့်တိုင်အောင် ….ဒီတစ်နှစ်အဖို့ တော့ …သူသည် အတန်အသင့် အကျိုးပြုလာပါလိမ့်မယ်။
ဒါကြောင့် နံ့သာရောင် ၊ ၀ါညိုရောင်တို့ကို အသုံးပြုနိုင်သလို..၊ အဖြူရောင်ကိုလည်း အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
အထူးသဖြင့် မင်္ဂလာမောင်မယ် တို့ မှာ အဖြူရောင်သည် အင်္ဂါနေ့ဖွားတွေအတွက် ..သည်တစ်နှစ်အဖို့ ..မင်္ဂလာကျက်သရေ တည်နေတဲ့အရောင်ဖြစ်ပါတယ်။
ထီထိုးမယ်ဆိုရင် ကြာသာပတေးနေ့မှာ ထိုးပါ။ ၅၊ ၂၊ ၉ ဂဏန်းများ အကျိုးပြုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျား။
ဗုဒ္ဓဟူး/ရာဟုဖွားတို့ ကံဇာတာ (၁၃၇၉)
ဗုဒ္ဓဟူး နဲ့ ရာဟု ဖွားတို့သည်…တူသယောင်ယောင်နဲ့ ကွဲလွဲသော အကျိုးပေးကံတွေ ရှိကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် …လက်ဝင်ပေမယ့် ..ရသလောက်တော့ …ကြိုးစားခွဲခြားပြီး ရေးပေးသွားပါ့မယ်ခင်ဗျာ။
ဒီတစ်နှစ်မှာ ဗုဒ္ဓဟူး/ရာဟုသည် အဓိပတိဌာနမှာ ရပ်တည်ရပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဟူးအနေနဲ့ သာမာန်ရပ်တည်မှုမျိုး ဖြစ်သော်လည်း …ရာဟုအနေနဲ့ကတော့..မဟာဘုတ် ဥစ်ဂြိုဟ် ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနှစ်မှာ ဗုဒ္ဓဟူး/ရာဟု ဖွား ဇာတာရှင်တွေသည်….စွမ်းဆောင်ရည် ပေါ်လွင်လာမယ့် အနေအထား ရရှိလာပါတယ်။
နောက်ကွယ်ကနေ နေချင်သူအချို့တောင်….မနေသာပဲ ရှေ့ထွက်ပြီး စွမ်းဆောင်ရည် ပြကြရမယ့်နှစ်မျိုးပါပဲ။
အကျိုးစီးပွား အင်မတန် ရှာရဖွေရလွယ်ကူလာစေတတ်တဲ့ နှစ်မျိုးပါ။ ပညာပဲရှာရှာ..၊ စီးပွားပဲရှာရှာ ၊ လောကီအကျိုးစီးပွား၊ လောကုတ္တရာအကျိုးစီးပွား ဘာပဲရှာရှာ …ရလွယ်…နီးစပ်သော နှစ်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ဖွားများအနေနဲ့…နီးစပ်ရာ ..အနီးအနားမှ မိတ်ေ်ဆွများ နဲ့ ဆက်နွယ်ပြီး အကျိုးစီးပွား ဖြစ်ထွန်းလွယ်ကူပါမယ်။
ရာဟုဖွားများအနေနဲ့ကတော့….တစ်ကြိမ်နဲ့ ကြိုးစားလို့ မရခဲ့သေးသည့် အချို့သော ကဏ္ဍများကို ဒီတစ်နှစ်ထဲမှာ ပြန်လည်ကြိုးစားရယူနိုင်ခြင်း ရှိလာတတ်ပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့် ..ပြန်လည်ကြိုးစားအားထုတ် အောင်မြင်နိုင်သော ကံအခြေအနေ ရောက်ရှိနေချိန်ပါ။
ကိုယ်ပိုင်စွမ်းရည် တက်လာသည့်အခြေအနေနဲ့ ..အကျိုးစီးပွား ရှာလာဖွေလွယ် ကံကောင်းလွယ်တတ်သော အခြေအနေ နှစ်ရပ် မှာ….မူလဇာတာ နဲ့ ရောက်ဆဲအသက်ပိုင်း အရ…အားသာချက်သာ ရှိနေမယ်ဆိုရင်…သည်တစ်နှစ်သည်…ဗုဒ္ဓဟူး/ရာဟုုတို့အတွက်
သို့သော်……………….စပ်တူအစုစပ် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု ပြုမယ်ဆိုရင်တော့ အတော့်အတော်လေးကို ဂရုစိုက်ပြီးမှ …..ပြုပါခင်ဗျာ။ အစုရှယ်ယာကဏ္ဍတွေမှာ ဆိုးကျိုးပေးနိုင်သော နှစ်မျိုးဖြစ်လို့ပါပဲ။
လူပျိုအပျိုများအဖို့ ဖူးစာရေးနတ် မျက်နှာသာ ပေးတတ်ချိန်ပါ။ မိမိစိတ်ကူးယဉ်ထားတဲ့ …ဖူးစာဖက်မျိုးကို ကံတရားက ဖေးမပေး ..တွေ့ဆုံပေးလာတတ်သောကာလမို့….အချို့သော ဗုဒ္ဓဟူး/ရာဟု တို့အတွက် သည်တစ်နှစ်ကတော့….အချောအလှ..အယဉ် ..ငယ်ငယ်ချောချော (သို့) စိတ်တိုင်းကျ ..ဖူးစာဖက်မျိုးနဲ့ အတွဲလေးချိတ်မိနိုင်ပါသေး။
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ဖွားများအဖို့….အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် မပြတ်မသားနဲ့ ဝေးနေရတဲ့ ချစ်သူရည်းစားမျိုး ရှိခဲ့ရင်…ဒီတစ်နှစ်မှာ ပြန်ဆက်ရ လွယ်ကူပါလိမ့်မယ်။
ရာဟုဖွားတွေကတော့ မထင်မှတ်ပဲ ကောက်ရသလို ပေါ်လာမယ့် ကိုယ်ထင်ထားတာထက်…အဆင်ပြေနေမယ့် …အချစ်ရေးကဏ္ဍမျိုး ကြုံလွယ်တတ်ချိန်ကာလပါ။
အိမ်ထောင်သည် အမျိုးသား ရာဟုဖွား ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့…သည်တစ်နှစ်အဖို့……မစလိုက်မိပါစေနဲ့။ စလိုက်မိတာနဲ့….နံပါတ်2က ….ဂျိတ်ကနဲ ချိတ်သွားတတ်ပါကြောငး်။
အများစု ကောင်းမွန်ကြမယ့် နှစ်မျိုးပါ။
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ဖွားများ..ပညာရေး တစ်ပိုင်းတစ်စ ဖြစ်နေသူအချို့…ဆက်လက်တက်ခွင့် သင်ယူခွင့်ပါ ရရှိတတ်ကြပါတယ်။
ရာဟုဖွားများ…မထင်မှတ်ဘဲ သင်တန်းတစ်ခု (သိပ်အလိုအပ်ကြီးမဟုတ်သော်လည်း) တက်ခွင့်ရပါမယ်။
ကိုယ်ဘယ်လိုင်းမှန်းထားတယ်..ဘယ်လိုပန်းတိုင်ကို ..စသည်ဖြင့် ကျိန်းသေ ရည်မှန်းထားသည်များ….လွဲချော်တတ်သော ကာလပါ။
နဂိုအခံ အတက်ရောဂါ၊ မူးမေ့တတ်ခြင်း၊ အပြင်းဖျား၊ ငှက်ဖျား နှင့် အူရောင်ငန်းဖျား၊ အဆုတ်နာ၊ ခြင်ဆီအားနဲခြင်းဆိုင်ရာ ဝေဒနာများ ကဲ့သို့ ဝေဒနာမျိုး ခံစားဖူးသူများ …သည်တစ်နှစ် ပိုမိုသတိပြုရပါမယ်ခင်ဗျာ။
ကံမကောင်းရင် တစ်ကျော့ပြန်လည်လာတတ်သော နှစ်မျိုး ဖြစ်လို့ပါပဲ။
နေရင်းထိုင်ရင်း..အုံးလွဲသွားသလိုလို..၊ ခါးမျက်သွားသလိုလို၊ အမှတ်မဲ့ ထသွားထိုင်လျောင်း အဆင်မပြေ ရာကနေ…ဟိုအကြောကပ်၊ သည်အကြောတင် လည်း ဖြစ်လွယ်နေသော ကာလတစ်ခုပါ။
နေရင်းထိုင်ရင်းကိုပဲ…စိတ်မြန်လာမယ့်၊ တစ်ခုခု ထလုပ်ချင်သလို ဖြစ်နေမယ့် နှစ်မျိုးပါပဲ။ ကိုယ်လုပ်နိုင်တယ်..ဆိုတာလည်း ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်လာပါမယ်။ စွမ်းအင်ထုတ်လို့ သိပ်ကောင်းတဲ့နှစ်မျိုးပါ။
ရှေ့တန်းတိုက်စစ်မှုးနေရာမျိုးကနေ…..အရာရာကို ထိပ်ဆုံးတွန်းထိုးဖောက်ထွက်နေရမယ့် နေရာမျိုးမှာ…..နေကြရတတ်ချိန်ပါ။
အရည်အသွေးကို မဖုံးပစ်ပါနဲ့။ ပေါ်လွင်သည်ထက် ပေါ်လွင်အောင်ထားပြီး အသုံးချသင့်ပါတယ်။ အရည်အသွေးနဲ့ထပ်တူ..အကျိုးစီးပွားလည်း ကျယ်ပြန့်လာနိုင်လို့ပါပဲ။
အမုန်းခံရမယ့်ကာလပါ။ ရန်သူပိုမိုပေါလာပါမယ်။ ကိုယ့်ကိုမြင်လိုက်တာနဲ့…ပုခုံးချင်း် ယှဉ်မယ်ဆိုတာချညး်ပဲ …လူတော်တော်များများမှာ ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ဖွားတွေအဖို့ အရှက်မရအောင် ဂရုစိုက်ရပါမယ်။ မိမိတို့ ဂုဏ်သိက္ခာ နဲ့ ကျက်သရေမင်္ဂလာကို ချိုးဖောက်တိုက်ခိုက် ခံရလာတတ်ပါတယ်။ ရန်သူဟောင်း…ရန်စဟောင်းတွေ…ရှိခဲ့ရင် ပိုမိုသတိပြုရမယ့်နှစ်မျိုးပါ။
ရာဟုဖွားတွေအနေနဲ့…မိမိတို့ပိုင််ဆိုင်ထားသော …စက်ပစ္စည်းအချို့ ပျက်ဆီးဆုံးရှုံးမှု ဖြစ်လွယ်သော ကာလ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဗုဒ္ဓဟူးရော ရာဟုတွေရော အတွက်ပါ သည်တစ်နှစ်သည် …အကျိုးစီးပွားကို တွန်းတွန်းတိုက်တိုက် ပိုရှာကြသင့်သည့် နှစ်မျိုးပါ။
ရနှစ်မှ တစ်ခါ…ရနိုင်သည့် အခွင့်အခါမျိုးလို့လည်းဆိုနိုင်ပါတယ်။
အဓိကကတော့ ရန်သူပါပဲ။ အေးအေးဆေးဆေးနေချင်ပါတယ်ဆိုစေဦး..နေရခက်မယ့်ကာလမျိုးပါ။
အရှေ့တောင်အရပ်နဲ့ အနီရဲရဲအရောင်တို့ကို သတိပြု သွားလာခြင်း၊ သုံးစွဲခြင်း ပြုအပ်သောကာလပါ။
နံ့သာရောင်၊ အစိမ်းရောင်၊ အဖြူ နဲ့ ၀ါညိုရောင်တို့ကတော့ အကျိုးပြုနိုင်သော အရောင်များ ဖြစ်ကြပြီး…..၊ အနောက်စူးစူးနဲ့ အရှေ့အရပ်တို့သည် အကျိုးပြုအရပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။
အလုုပ်အကိုင် ရှာဖွေနေသူများ ..တောင်အရပ်ကနေ အလုပ်အကိုင် ရလွယ််တတ်ပါတယ်။
သည်တစ်နှစ်အကျိုးပေးဂဏန်းတွေကတော့….၅၊၄၊၈ တို့ပဲ ဖြစ်ကြပါတယ်။
ကောင်းမြတ်သော ၁၃၇၉ခုနှစ် တွင် …ဗုဒ္ဓဟူး ရာဟု ဖွားများ အားလုံး ကျန်းမာချမ်းသာ အောင်မြင်ခြင်း ရှိကြပါစေသတည်း။
ကြာသာပတေးနေ့ဖွားတို့ ကံဇာတာ (၁၃၇၉)
ကြာသာပတေးနေ့ဖွား တွေသည် ….ယခုနှစ်ဖို့ ရာဇဌာနတွင် ရပ်တည်ခွင့် ကြုံကြိုက်သော ကာလ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘာပဲပြောပြော…ဘယ်လိုပဲ ဝေဖန်သည် ဖြစ်ပါစေ….
သည်တစ်နှစ်အဖို့…ကံအကောင်းနိုင်ဆုံး…၊ ကံအခွင့်အလမ်း အသာနိုင်ဆုံး နေ့ဖွားသည် …ကြာသာပတေးနေ့ဖွား တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အလွန်အင်မတန်မှကို မူလဇာတာ…အမည်၊ ရောက်ဆဲအသက်ပိုင်းတို့အရ ..အညံ့ကြုံနေသူတို့သာ……ဒီနှစ်မှာ ဆိုးကျိုးကျရောက်နိုင်မှာဖြစ်ပြီး….အများစုကတော့ …..
ဒီတစ်နှစ် ၁၃၇၉ခုနှစ်သည်…ကံကောင်းမှုကြုံနိုင်ကြသော နှစ်မျိုးလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။
အကွက်ကျကျ စီစဉ်ထားတာတွေ….အစီစဉ်တစ်ကျ ရုပ်လုံးပေါ်လွယ်လာမယ့်ကာလ ဖြစ်ပါတယ်။ အခြွေအရံအပေါင်းအသင်း သိုက်သိုက်ဝန်းဝန်းနဲ့ ..စီးပွားရှာလွယ်သော ကာလမျိုးလညး် ဖြစ်ပါတယ်။
နဂိုကတည်းက…ဗျုဟာကျကျ..စီမံတတ်သူမျိုး ဖြစ်လေလေ…သည်တစ်နှစ်ဟာ အောင်မြင်နိုင်လေလေပါပဲ။
မလိုအပ်ဘဲ အသိမှတ်ပြုခံချင်မှု ကိုတော့ လျှော့သင့်တဲ့နှစ်ပါ။ မလိုအပ်ဘဲ မဏ္ဍဋ်တိုင် တက်ပြတာမျိုးလုပ်မိခြင်းကနေ..ရမယ့်အကျိုးစီးပွား အထစ်အငေ့ါဖြစ်တတ်ချိန်ပါ။
အများစုက ကိုယ့်ကို အလေးထားပြီး …အသိမှတ်ပြုလာတတ်ချိန်မို့..အလုပ်လုပ်သလောက်လည်း အသိမှတ်ပြုခံရပါမယ်။
သေချာအကွက်ချြူပီး တစ်ဆင့့်ချင်းသေသေသပ်သပ် ကြိုးစားနိုင်မယ်ဆိုရင် ဒီတစ်နှစ်ဟာ …လှေခါးထစ် တစ်ဆင့်တက်ခွင့် ရနိုင်တဲ့ ကောင်းသောအကျိုးခံစားခွင့် နဲ့ တူတဲ့ နှစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။
မူလဇာတာ ကောင်းခြင်း၊ မူလမှည့်ခေါ်ထားသော အမည်အနေအထား မှန်ကန်ခြင်း ရှိပါမှ…ဒီတစ်နှစ်သည် ..သက်သာရာရပါလိမ့်မယ်။
မူလဇာတာအနေအထားနဲ့ အမည်မှာပါ အပြစ်ရှိနေခဲ့သူ ကြာသာပတေးနေ့ဖွားအချို့အတွက်ကတော့….
ယခုကဲ့သို့သော နှစ်မျိုးသည်…..ချစ်ခင်စုံမက်ရသူနဲ့ ဝေးလွဲ ၊ ခွဲခွာလွယ်တတ်သော နှစ်မျိုးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အပျိုလူပျိုများအတွက် လည်း ရည်းစားလက်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များ…ရှိတာလေး ..ပဲဲ့မသွားအောင် ဂရုစိုက်ရမယ့်နှစ်ပါ။
ထူးဆန်းတာတစ်ခုကတော့….မဖြစ်နိုင်တဲ့အချစ်ရေးအခြေအနေမျိုး သော်လည်းကောင်း၊ အသိုက်အဝန်း၊ နေရာဒေသ၊ လူမျိုး၊ ဘာသာ၊ စသည်ဖြင့် ကွာခြားသော မေတ္တာရေးမျိုးသော်လည်းကောင်း၊ မိဘလူကြီးပတ်ဝန်းကျင် အသိုက်အဝန်းမှာ လက်ခံနိုင်ဖို့ ခက်ခဲသော မေတ္တာရေးအခြေအနေမျိုးသော်လည်း …ပေါ်ပေါက်လွယ်သော ကာလ ဖြစ်နေခြင်းပါပဲ။
အားနဲချက်တွေ …ပြစ်ချက်တွေ…ရှိနေသူကိုပဲ ဖြစ်ဖြစ်…အချစ်ဆိုတဲ့ မျက်လုံးနဲ့ ကြည့်ပြီး…..ရွေးခြယ်မိစေတတ်သော နှစ်မျိုးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
အိမ်ထောင်ရေး..မေတ္တာရေးမှာ…နယ်လုစစ်ပွဲတွေ မပြုမိကြဖို့လည်း အထူးလိုအပ်ချိန်ပါ။ နေရာလုတာ…နေရာအတွက် ..အချင်းပွားရတာ၊ ဘယ်မှာနေမယ်…ဘယ်လိုနေမယ်စသဖြင့်….အငြင်းအခုန်ဖြစ်ကြတာမျိုး တွေ ပြုမိမယ်ဆိုရင်တော့…သည်တစ်နှစ် အချစ်ရေးသည် …အနှုတ်လက္ခဏာ ပိုိမိုပြလာမယ့် နှစ်ပါပဲ။
အမည်အရ ဆိုရင်တော့….အမည်အဖျားစာလုံး (အဆုံးစာလုံးကို) ရ၊ယ၊လ၊၀ ဖြင့်မှည့်ခေါ်ထားမိသော ကြာသာပတေးနေ့ဖွားများအဖို့ …မေတ္တာရေးရာအဝဝမှာ သတိထားရတော့မယ့် ကာလ ဖြစ်ပါမယ်။
ဥပမာအားဖြင့် ..မြင့်မြင့်ဝေ၊ မြင့်ဆွေဝင်း၊ ရှင်းသန့်လင်း၊ အေးအေးယု၊ မြတ်နိုးရွှေ….စသည်….။
လုပ်သလောက် အသိမှတ်ပြုခံရမယ့် ကာလပါ။
သို့သော် သင်တန်းတွေ၊ နောက်ထပ် သင်ကြားမှုတွေ ပြုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်တော့ သေချာစဉ်းစားပြီးမှသာ ..တက်သင့်မတက်သင့် ခွဲခြားဆုံးဖြတ်ပြီးမှ တက်ပါ။
မလိုအပ်သော သင်တန်းအပို်တွေ တက်မိခြင်းမျိုးကနေ…ဒီတစ်နှစ်မှာ အချို့သော အကျိုးစီးပွားတွေ လက်လွှတ်ရတတ်ခြင်း ရှိနိုင်လို့ပါပဲ။
ဒီတစ်နှစ်က မျိုးရိုးလိုက်သော ရောဂါဘယ အမျိုးအစားများ ဖြစ်ပွားလွယ်တတ်သလို…၊ အမျိုးသမီးမီးယပ် မမှန်ကန်တတ်ခြင်း( အများအားဖြင့်င (ထိမ်ကျန်ခြင်းနဲ့ ချုပ်ခြင်းမျိုး ) ဖြစ်ပွားလွယ်တတ်ပါတယ်။
ရင်ကျပ်ခြင်း နဲ့…အသက်ရှုမဝသကဲ့သို့ မကြာမကြာ ဖြစ်တတ်ခြင်းမျိုး ..ခံစားရတတ်သော နှစ်မျိုးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဆွေမျိုးသွေးသားရေးရာကဏ္ဍမှာ…အဆင်မပြေမှုအထစ်အငေ့ါလေးတွေ ဖြစ်လွယ်တတ်သော ကာလ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတစ်နှစ်မှာ နေရာလုရတဲ့အခြေအနေအချို့လွယ် …ဖြစ်လွယ်ကြုံလွယ်ပါတယ်။
သူတစ်ပါးကိစ္စအတွက် ကိုယ်က ရန်ဝင်ဖြစ်ချင်လည်း ဖြစ်နေရတတ်ပါတယ်။
ကံကောင်းစေတတ်သော ကာလ ဖြစ်သော်လည်း…(စနေနေ့တွေသည်) မိမိရဲ့ ဂုဏ်သတင်းကို ညှိးမှိန်လွယ်စေတာကို တော့ သတိပြု ထိမ်းသိမ်းနိုင်ဖို့ လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
ဒီတစ်နှစ်မှာ ကိုယ်နဲ့မသက်ဆိုင်ဘဲ…၀င်အာမခံပေးတာ၊ သူများအလုပ်ကို ၀င်လုပ်ပေးမိတာမျိုးတွေသည်…မိမိအကျိုးစီးပွားကို ယုတ်လျော့စေနိုင်တာလေးကိုလည်း ….ဆင်ခြင်ရပါမယ်။
အိမ်နီးနားပတ်ဝန်းကျင်မှာ…ကောငး်သောမင်္ဂလာ အခမ်းအနားမျိုး ပေါ်ပေါက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်…..မိမိအတွက်လည်း ကောင်းကျိုး ရလာတတ်သော နှစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။
ထို့အတူ…အိမ်နီးနားချင်း..အခန်းနီးနားချင်းတွေနဲ့လည်း သင့်တင့်အောင် အဆင်ပြေညီညွတ်အောင် နေထိုင်သင့်သော နှစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတစ်နှစ်..ကံကောင်းမှုသည် အနီးနားပတ်ဝန်းကျင်နဲ့လည်း ဆက်နွယ်နေတတ်ခြင်းကြောင့်ပါပဲ။
မေတ္တာရေး အဆင်မပြေကြသူများအဖို့ အစိမ်းရောင်ကိုတော့….နုနုရင့်ရင့်…ဖြစ်နိုင်သမျှ ရှောင်ရှားသင့်ချိန်ပါ။
ခရမ်းပြာရောင်နဲ့….နံ့သာရောင်သည် တစ်နှစ်လုံးအတွက် အကျိုးပြုအရောင်များဖြစ်ပါတယ်။
ထီကံစမ်းလိုသူများအတွက်ကတော့…၅ ၊ ၆ ဂဏန်းများသည်….အကျိုးပေးအား အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
ထီကံစမ်းသင့်တဲ့ ရက်ကတော့…တနင်္ဂနွေနေ့ပဲ ဖြစ်ပါကြောင်း။
ကြာသာပတေးနေ့ဖွား အပေါင်းတို့သည် …နှစ်သစ် ၁၃၇၉ခုနှစ်အတွငး် ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ကျန်းမာချမ်းသာခြင်း ရှိကြသည် ဖြစ်ကြပါစေသတည်း။
သောကြာနေ့ဖွားတို့ ကံဇာတာ (၁၃၇၉)
သောကြာဂြိုဟ်သည် …ယခုနှစ်အဖို့….အထွန်းဌာနတွင် မဟာဘုတ်ဥစ်ဂြိုဟ်အဖြစ် ….ရပ်တည်လာပါတယ်။
သောကြာနေ့ဖွား တွေ အတွက် …ဒီတစ်နှစ်သည်…ခြွေရံသင်းပင်းများခြင်း၊ ကောင်းသောစားစရာ ၊ ၀တ်စားတန်ဆာတို့ဖြင့် ပြည့်စုံစေတတ်ခြင်း၊ စည်းစိမ်ခံစားရခြင်း …ပိုမိုရရှိလာတတ်သော ကာလဖြစ်ပါတယ်။ အလားတူပင်….နေရာကောင်းရခြင်း၊ နေရာပေးရခြင်း၊ ကောင်းသောဌာန၊ ကောင်းသော နေရာ၊ ကောင်းသော အခွင့်အလမ်းအချို့လည်း ရနိုင်သော ကာလ ဖြစ်ပါတယ်။
အကျိုးစီးပွားရှာဖွေရာမှာ ရှေးကကဲ့သို့မဟုတ်ဘဲဲ…လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်အချို့ကို ပြောင်းလည်းရမယ့်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနှစ်အကျိုးစီးပွားရှာဖွေရရှိရေးနဲ့…အလုပ်အကိုင် ကဏ္ဍမှာ…ထင်သလောက်မကောင်းတတ်ပါ။ အချို့သော သောကြာနေ့ဖွားများ ..အလုပ်မှ နှုတ်ထွက်ရခြင်း၊ အနားယူရခြင်း ရှိနိုင်သောကာလ လည်းဖြစ်ပါတယ်။
ရှေးယခင်လို လွယ်လွယ်ကူကူမဖြစ်တော့ဘဲ…အထစ်အငေါ့များပြားလာတတ်ချိန်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အချစ်ရေး မေတ္တာရေးမှာ ပြိုင်ဘက်ရန်သူ ပေါ်လွယ်သောကာလပါ။
အပျိုလူပျိုများအဖို့…မိမိချစ်သူကို အခြားသူက လာကြူတာမျိုး ကြုံရတတ်ခြင်းသော်လည်းကောင်း….မိမိက …အခြားသူတစ်ဦးရဲ့ ချစ်သူကို …မြတ်နိုးစုံမက်မိခြင်းမျိုးသော်လည်းကောင်း ….. ကြုံကြိုက်ကြရတတ်သော ကာလဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ကယ်ကတော့…အချစ်ရေး မေတ္တာရေးမှာ….ယှဉ်ပြိုင်ဘက် ပေါ်လာတတ်သောကံပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အိမ်ထောင်သည်များ အဖို့ ……မိမိနေအိမ်ကို သူစိမ်းသူရံ အရွယ်ကောင်း အင်္ဂါနေ့ဖွား သို့မဟုတ် အင်္ဂါနံအမည်ရှင်မျိုး …ညဉ့်အိပ်ညဉ့်နေ…သို့မဟုတ် ယာယီအတူနေအဖြစ် ….မထားတာ ပိုသင့်ပါလိမ့်မယ်။
ဒီတစ်နှစ်မှာ….ဖူးစာရေးနတ်ကလေးက…..စစ်ဘက်၊ စက်မှုနယ်ပယ်ဘက် သို့မဟုတ် ထက်မြက်ထူးချွန်သော…စိတ်ဆတ်သော …ဖူးစာဖက်မျိုးကို ….ချိန်ရွယ်ပစ်ခတ်ပေးတတ်သော ကာလပဲဖြစ်ပါတယ်။
မပြီးနိုင်မစီးနိုင် ပညာရေး အနေအထား ဖြစ်ပေါ်လွယ်ေ်သာ နှစ်ပါ။
အချို့ကတော့ ပညာရေးမှာ ဘွဲ့လွန်လိုမျိုး……ဆက်ခါဆက်ခါ တက်ခွင့်တွေ ရရှိကြပါမယ်။
ပညာဘယ်လောက်တော်တော်…အသိမှတ်ပြုခံရဖို့တော့ ခက်ခဲတဲ့ကာလ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီတစ်နှစ်သတိထားအပ်သော နှစ်ပါ။ အာယုဂြိုဟ်တနင်္ဂနွေ နဲ့ ပက္ခအဖြစ် ရပ်တည်ဆက်နွယ်နေမယ့် နှစ်ဖြစ်တာကြောင့်…သည်တစ်နှစ်….အဖို့…ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်လေးတွေ ပေါ်လွယ်လာတတ်ချိန်ပါ။
ဦးခေါင်း၊ နှလုံး ၊ အရိုးအဆစ် ပိုင်းဆိုင်ရာ ဝေဒနာအခံရှိထားသူများ ပိုမိုဂရုစိုက်အပ်သော နှစ်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။
သောကြာနံ အစ + အဆုံး အမည်ရှင်များ / ဥပမာအားဖြင့် ….သွယ်သွယ်ဟန်၊ သီတာမြင့်သူ၊ သန်းထိုက်မိုးဟိန်း၊ သော်ဇင်ဟိန်း စသည်ဖြင့် ့သော အမည်ရှင်များ အဖို့ ကျန်းမာရေး ပိုမိုဂရုစိုက်အပ်သော နှစ်မျိုးပါ။ ..
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အခြားသောကြာနေ့ဖွားတွေလညး် ဒီတစ်နှစ်ကျန်းမာရေးသည် ..အထူးဂရုပြုရမယ့် နှစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။
အထောက်အပံ့ကောင်းရလွယ်ခြင်း၊ နေရာကောင်းရတတ်ခြင်း၊ နေရာပေးခံရခြင်း၊ ကျောထောက်နောက်ခံကောင်းများ အလိုလို ရရှိတတ်ခြင်း ဆိုတဲ့ ကုသိုလ်ကံအကျုုိးပေးလေးတွေ ပေါ်ပေါက်လာတတ်သော ကာလ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် …ဒီအကျိုးပေးကံလေးကို….အကျိုးရှိရှိအသုံးချသင့်ပါတယ်။
အလုပ်အကိုင်တွေကတော့ ထင်သလိုမဖြစ်တတ်ချိန်မို့….ယခင်ထက်ပိုမိုကြိုးစားနေကာမှ တော်ရုံကြမယ့်ကာလပါ။
အိမ်ထောင်ရေးဆိုးတတ်သောကာလမဟုတ်သော်လည်း…ရန်ကိန်းလေး တွေပေါ်လွယ်တတ်ချိန်ပါ။ အထူးသဖြင့် မိမိတို့အိမ်ထောင်ဖက် သို့မဟုတ် ချစ်သူသည် ခါတိုင်းနဲ့မတူပဲ..စိတ်တို စိတ်ဆတ်လာတတ်ပါတယ်။
အိမ်နီးနားချင်းတို့ရဲ့ အကျိုးကို ခံစားရတတ်ပါတယ်။
ဒီတစ်နှစ်မှာ…..အလိုလိုနေရာကောင်းရရှိခွင့်ကံ နဲ့…..အထောက်အပံ့ကောင်းရရှိတတ်သော ကံ တို့နဲ့ ….ဆုံမိရင်တော့…သက်တောင့်သက်သာ မျောလိုက်ပြီး …အဆင်ပြေမှာ သေချာပါတယ်။
ကိုယ်တိုင်ထွင်ဖောက် ထွင်လျှောက်ဖို့ကတော့ တယ်မလွယ်လှတဲ့ နှစ်ပါပဲ။
အချို့သော သောကြာနေ့ဖွားများ…ရာထူးတိုးတက်ရေး…ကဏ္ဍမှာ မပြတ်မသားနဲ့ ရမလိုလို မရမလိုလို….လိုလို…လိုလို စခမ်းသွားရပါလိမ့်မယ်။
ဆောင်အပ် / ရှောင်အပ်
ဒီတစ်နှစ်လုံးမှာ ….သောကြာနံနဲ့ ကြာသာပတေးနံတို့ အထူးအကျိုးပေးလာတတ်ပါတယ်။
ခရမ်း၊ ခရမး်ပြာ နဲ့ …၀ါရွှေရောင်၊ နံ့သာရောင်တို့သည် …အထူးအကျိုးပေးသော အရောင်များအဖြစ် ရပ်တည်မှာဖြစ်ပြီး…….
အိမ်ထောင်ရေး အချစ်ရေးအဆင်မပြေဖြစ်နေကြသူများကတော့ အနီရဲရဲအရောင်ကို အထူးရှောင်ကျဉ်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။
ထီကံစမ်းမယ်ဆိုရင် ၆ ၊ ၅ ၊ ၂၊ ၉၊ နဲ့ ..(၃) ဂဏန်းကို နောက်ဆုံးမှာတွဲပြီး..မိမိနေရာအရပ်နဲ့ နဲဲနဲဝေးသော ဆိုင်တစ်ဆိုင် ကနေ ကံစမ်းသင့်ချိန် ဖြစ်ပါကြောင်း………….။
ယခုနှစ် ၁၃၇၉ခုနှစ် အတွင်း …သောကြာနေ့ဖွား အပေါင်း သူတော်ကောင်းတို့သည်….စိတ်၏ ကျန်းမာခြင်း ..ကိုယ်၏ ကျန်းမာခြင်းနှင့် ပြည့်စုံပြီး…..လောကီအကျိုး ၊ လောကုတ္တရာအကျိုး…သယ်ပိုးနိုင်ကြသည် ဖြစ်ကြပါစေသတည်း။
စနေနေ့ဖွား တို့ ကံဇာတာ (၁၃၇၉)
စနေနေ့ဖွားတို့သည် …ယခုနှစ်အဖို့ မွေးနံဂြိုဟ် ဘင်္ဂမှာ ရပ်တည်ချိန် ကျရောက်လာပါတယ်။
စနေနေ့ဖွားများ အတွက် …အပြောင်းအလည်း များစွာ ဖြစ်လွယ်သော ကာလ တစ်ခုလို့ ဆိုနိုင်သလို…. … အမျာစုအဖို့ မေတ္တာရေးရာ ချစ်မှုရေးရာတို့မှာလည်း ကံကောင်းနိုင်မှု ကြုံနိုင်သော အချိန် ဖြစ်လာပါတယ်။
အပြောင်းအလည်းများစွာထဲမှာ….မကောင်းတဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကတော့ …မနေလိုသောနေရာဌာနကို ပြောင်းလည်းရတတ်ခြင်း၊ ပြောင်းရွှေ့ရတတ်ခြင်းကံသည် ထိပ်ဆုံးမှာ ပါတတ်ချိန် လို့လည်း ဆိုနိုင်ပါကြောင်း။
ဒီတစ်နှစ် အလုပ်အကိုင် ကဏ္ဍမှာ ….စနေနေ့ဖွားများအဖို့…ယာယီအလုပ်မျိုးတွေ၊ ဇက အလုပ်မျိုးတွေ၊ သောင်မတင်ရေမကျ အခြေအနေတွေ ရောထွေးပါ၀င်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။ အများစုသော စနေနေ့ဖွားများအဖို့….ယင်းအခြေအနေမျိုးတွေ ရင်ဆိုင်ရတတ်ချိန်ဖြစ်ပြီး…..
အချို့သော စနေနေ့ဖွားများ အဖို့ကတော့ ….အသက်မွေးမှု အလုပ်အကိုင် တစ်ခုမက …နှစ်မျိုးနှစ်ခွကို တစ်ပြိုင်နက်တည်း ထိမ်းချုပ်ကိုင်တွယ် လုပ်ကိုင်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားနေရတတ်ချိန် ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
အချို့သော စနေနေ့ဖွားများ…အလုပ်အကိုင် အသက်မွေးမှု အကူးအပြောင်း ရှိတတ်ပြီး….ခေတ္တာယာယီအားဖြင့် …အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်နေတာမျိုး အခြေအနေအချို့လည်း ကြုံကြိုက်ကြရတတ်ပါတယ်။
ဒီတစ်နှစ် စနေနေ့ဖွားတို့ရဲ့ အသက်မွေးမှု အလုပ်အကိုင်နဲ့ …အကျိုးစီးပွား အဝဝကို …ဆန့်ကျင်တတ်သော ..နေ့ရက်ကတော့ …သောကြာနေ့ဖြစ်တာမို့..၊ ၄င်းနေ့မျိုးမှာ အလုပ်အကိုင် အသက်မွေးမှု ကဏ္ဍများ လုပ်ကိုင်ရာမှာ အနဲငယ်သတိထားပြီး လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်သင့်ပါတယ်။
ချစ်မှုရေးရာ နှင့် မေတ္တာရေး
တော်တော်များများသော စနေနေ့ဖွားများအဖို့ မေတ္တာရေး ကံအားသာတတ်ချိန်ပါ။ အိမ်ထောင်သည်များအဖို့ မိမိတို့အိမ်ထောင်ဖက် နှင့် ပတ်သက်စပ်လျဉ်းသော ကောင်းကျိုးသုခ ရရှိလွယ်တတ်သလို..၊ သို့တည်းမဟုတ်..အိမ်ထောင်ဖက် တွင် ထူးထူးခြားခြား ကံကောင်းမှု ပေါ်ပေါက်နေခြင်းမျိုးသော်လည်းကောင်း …တွေ့မြင်ရတတ်ချိန် လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။
လူပျိုလူလွတ်များအဖို့တော့ ….ဒီတစ်နှစ်သည် ..ဖူးစာရေးနတ် မျက်နှာသာပေးတတ်ချိန် ဖြစ်တာကြောင် ့….ကြံစည်ကြိုးကုတ် အစွံထုတ်ကြဖို့…လုံ့လပြုသင့်သော ကာလဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ့်ထက်မြင့်တဲ့သူမျိုးနဲ့ ဖူးစာရေးရှိတတ်ချိန်မို့….ကိုယ်နဲ့အလှမ်းကွာတယ်ဆိုပြီး…ဒီတစ်နှစ်တော့ အားမငယ်လိုက်ဘဲဲ….အနိုင်ကျဲလိုက်သင့်တဲ့ ကာလ ဖြစ်ပါကြောင်း။
တစ်ကျော့ပြန် ပြန်လည်ကြိုးစားရယူနိုင်စွမ်း ရှိလာတတ်ချိန် ပါ။ ဒါကြောင့် …ပြန်လည်ကြိုးစားအားထုတ်ဖို့ မမေ့မလျော့ ..ရှိသင့်ကြပါတယ်။ ကျရှုံးဖူးထားသော စာမေးပွဲမျိုးတွေ သိပ်ပြီး ပြန်ဖြေလို့ ကောင်းတတ်ချိန်..ပြန်ဖြေနိုင်စွမ်း ရှိလာချိန် ဖြစ်ပါတယ်။
အလိုလိုနေရင်း အကြောအချဉ်များ တောင့်တင်းလွယ်နေတတ်ပါတယ်။ အာရုံကြောဝေဒနာအခံရှိဖူးသူများ...ဒီတစ်နှစ်ထဲမှာ…အာရုံကြောပိုင်းဆိုင်ရာ ဝေဒနာပြန်ပေါ်လာပါမယ်။
နေရထိုင်ရတာ အလိုလိုနေရင်းကို မအီမသာ ဖြစ်နေတတ်ချိန်ဖြစ်ပါတယ်။
အထူးသဖြင့် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွေမှာ အထက်ပါကဲ့သို့ မအီိမသာဖြစ်မှုမျိုးကို ပိုမိုသိသိသာသာ ခံစားရတတ်ပါတယ်။
အာယုဂြိုဟ် အနေအထား ကောင်းချိန်မို့….ဗုဒ္ဓဟူးနေ့နဲ့ တနင်္လာနေ့များကလွဲရင် …ကျန်နေ့ရက်များမှာ ကျန်းမာရေးစတင်ယိုယွင်းမှုမျိုး ဖြစ်ဖို့ခဲယဉ်းစေတတ်ပါတယ်။
အများစုအဖို့ ကျန်းမာရေး ကောင်းမွန်နိုင်သော နှစ်မျိုးလို့ ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
ဒီတစ်နှစ် စနေနေ့ဖွားတွေကို အညံ့နိုင်ဆုံးကံကတော့…..နေရတာမပျော်တဲ့ စိတ်….နှိပ်စက်ဖိစီးတတ်ခြင်းပါပဲ။ ငွေတွေသိန်းချီအောင် ၀င်နေပါစေ၊ ရွှေဇွန်းခယင်းနဲ့ပဲ စားနေရပါစေ၊ အချစ်ဆုံးသူနဲ့ပဲ အတူတူနေနေရပါစေဦး….နေရထိုင်ရတာ အဆင်မပြေ သလို ဖြစ်ဖြစ်လာပြီး ငြီးငွေ့စိတ် ပင်ပန်းစိတ် ၀င်လာတတ်သော ကာလမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအခြေအနေကြီးနဲ့ပဲ …ကြာတော့ ပျင်းလာ ငြီးငွေ့စိတ်ကုန်လာပြီ ဆိုတဲ့ စိတ်မျိုး မကြာမကြာ ၀င်လာတတ်သော နှစ်တစ်နှစ်ပါပဲ။
၀န်ထမ်းအချို့လည်း …မပျော်ပိုက်တဲ့နေရာ…မနေလိုတဲ့ဌာနမျိုးကို ပြောင်းရရွှေ့ရ တတ်ပါတယ်။
နယ်စွန်နယ်ဖျားတွေ၊ သူများမသွားလိုတဲ့ နေရာတွေကို …အလွယ်တစ်ကူကိုယ့်မှာ တာဝန်ကျပြီး သွားနေရတတ်တဲ့ကာလ ဖြစ်ပါတယ်။
ချစ်၍ခင်၍ ပေးသော လာဘ်မျိုး…၀င်လွယ်သော အချိန်ပါ။ ပျိုရွယ်သူအဖို့ တိုးတိုးတိတ်တိတ်လက်ထပ်ခြင်းမျိုးဖြစ်စေ…၊ လူနဲစုနဲ့အကျဉ်းရုံးလက်ထပ်ခြင်းမျိုးဖြစ်စေ…ကြုံလွယ်သောကာလမျိုးလည်း
အချို့သော စနေနေ့ဖွားများ…မရွယ်ဘဲ စော်ကဲမင်းဖြစ်သလို….မထင်မှတ်ထားဘဲ…(ကိုယ်နဲ့မသက်ဆိုင်ဘဲ) ကောင်းကျိုးသုခ ခံစားရခြင်းမျိုးလည်း ထူးထူးခြားခြား ပေါ်လာတတ်ချိန် ဖြစ်ပါတယ်။
မေတ္တာရေး နဲ့ ကျန်းမာရေးအတွက်ဆိုရင်….တနင်္လာနေ့ ကို သတိပြုဆင်ခြင်အနေအပ်ဆုံးကာလ ဖြစ်ပါတယ်။
အသက်မွေးမှုအတွက် အလုပ်အတွက် ..စသည်ဖြင့်တွေကတော့ သောကြာနေ့ကို သတိပြု လုပ်ကိုင်ရမှာ ဖြစ်သလို…၊ လက်ထပ်ထိမ်းညားလိုသူများအဖို့လည်း……သောကြာနေ့ကိုတော့ ရှောင်ရှားသင့်လှပါတယ်။
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအဖို့ကတော့ ကြာသာပတေးထောင့်မှာ ကောင်းမှုကုသိုလ် မကြာမကြာပြုပြီး….အဓိဌာန်စသည်တို့ဝင်ခြင်းဖြင့် ကံကောင်းမှု မုချ ပေါ်လွယ်တတ်သော ကာလ ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်နှစ်တာကာလပတ်လုံးမှာ…အနီရဲရဲအရောင် နဲ့ အနက်ရောင် ကို အဓိက ရှောင်အပ်ပြီး .. …ရွှေအိုရောင် ရင့်ရင့် နဲ့…ခရမ်းရင့်ရောင်များကတော့ မိမိတို့အတွက် ဆောင်သင့်သောအရောင်များ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
ထီကံစမ်းလိုသူများအဖို့….၄၊ ၈၊ ၅ ဂဏန်းများ နဲ့ …သောကြာ နေ့ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့နဲ့ ကြာသာပတေးနေ့များ မှာ ကံစမ်းသင့်ချိန် ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျား။
ယခုုနှစ်အခါသမယအတွင်း စနေနေ့ဖွားအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည် စိတ်၏ ကျန်းမာခြင်း ၊ ကိုယ်၏ ချမ်းသာခြင်း ဖြင့် ပြည့်စုံနိုင်ကြသည် ဖြစ်ကြပါစေသတည်း။
Credit : ကိုစိုးမိုးထွန်း ( ဗေဒင်ပညာ သုတေသီ )
Previous PostPrevious (၁၃၇၉) ခုႏွစ္ (၁)ႏွစ္စာေဗဒင္ေပါင္းခ်ဳပ္
Next PostNext ( ၂ ) ႀကိမ္ေျမာက္ ထီေပါက္စဥ္